Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/5 Novambra 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/5 Novambra 2013
nailiky (nitranga in-1) : Omaly indray dia mbola nailiky ny AS Saint-Michel, tamin'ny alalan'ny isa 30 no ho 27 izy ireo ka nahavery fanan- tenana azy ireo eo amin' ny ady ho an'ny anaram-boninahitra tompondaka. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
Takian' (nitranga in-1) : Takian'ity sendika ity ny fametrahana ilay vaomiera misahana ny fandraisana mpampianatra sy famindran-toerana isaky ny fari-piadidiam-pampianarana (Cisco). (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
nahasakana (nitranga in-1) : Samy nandeha tsy nisy nahasakana kosa ny lalao natrehan'ny THBC, tompondakan'i Madagasikara sokajy vehivavy sady tompon- dakan'ny Ranomasimbe Indianina sy ny HBCT, sokajy lehilahy. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
nandrita (nitranga in-1) : tanaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe Firaisana ara-nofo, Fanalàn-jaza ary Fifehezantena, miverina mitodika ny lasa nangirifiry niainany ilay bilaogera tsy mitonona anarana ao amin'ny Hala/Cleo no sady manohana ihany koa ilay namany nandrita ireo dingana narahana tamin'ny fanalàn-jaza tao Ejipta. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
nijoroan' (nitranga in-1) : 40 taona lasa izay no nijoroan'ny sampana manokana mikarakara ireo alika mpi­tsongodia eo anivon'ny zandarimariam-pirenena. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Nahatratra (nitranga in-3) : Nahatratra 89 ireo mpilomano avy amina ligim-paritra efatra (Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana ary Boeny) niatrika ny fifaninanana teny amin'ny dobo filomanosana olympikan'ny ANS Ampefiloha. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Ambalavihy (nitranga in-1) : Ora vitsy talohan'io indray dia efa nisy fanafihana nitranga nahaverezana volamena mitetim-bidy 150 tapitrisa ariary, vola 1 tapitrisa ariary, finday 16, »lecteur » roa, »puce » fampiasa amin'ny finday 20 mahery, vary sy lamba isan-karazany tao Ambalavihy fokontany Betsingala, tao Mampikony ihany ny zoma hifoha sabotsy tamin'ny 1 ora maraina. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
handball (nitranga in-1) : faharesena indroa nisesy no vokatra azon'ny Asco, avy any Toliara, teo amin' ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara ho an'ny handball, sokajy lehilahy. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
Fihinana (nitranga in-1) : Fihinana fanafody mandra-pahafaty, izay mampihena fotsiny ny fitombon'ny aretina no misy. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
Andriamahefa (nitranga in-1) : Nivoaka sady nananga-tanana ilay mpaka an-keriny izay nitondra basy Makarov tamin'io», hoy ny fitantaran-dRazanakoto Andriamahefa Jimmy, mpibaiko ireo alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
navery (nitranga in-1) : Isan'ireo naverin'ny Sefafi indray ny tolo-kevitra efa narosony tany aloha amin'izay maha- kasika ny androm-pifidianana. (FANEHOAN-KEVITRY NY SEFAFI-« Tsy mahaleo tena ny Cenit »)
notànan' (nitranga in-1) : Toerana izay teo aloha dia notànan'ilay Minisitry ny Fitsarana fahiny, Herbert Volney, avy amin'ny governemanta iraisan'ny People's Partnership. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
savate (nitranga in-2) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Hôtel (nitranga in-1) : Tsy hanohana kandidà
Nilaza ireo kandidà nirotsaka ho Filoham-pirenena voasokajy ho “madinika” omaly teny amin'ny Hôtel Colbert Antaninarenina fa tsy hanohana kandidà izy ireo amin'ny fihodinana faharoa. (Tapatapany)
Ralitera (nitranga in-1) : Miangaly Ralitera. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
Facebook (nitranga in-4) : Samy nivoahan'ny fanehoankevitra mikasika ilay vokatra daholo, avy amin'ireo mpisera anaty aterineto, na ny Twitter na ny Facebook. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
mpifanandrina (nitranga in-2) : Tsy nandray anjara rahateo i Estellah Fils Rabetsara, mpifanandrina akaiky taminy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
League (nitranga in-1) : iray amin'ireo klioba heverina hiakatra ampahavalon-dalana ny Real Madrid
Hiditra amin'ny andro fahefatra, ho an'ireo lalao miverina isam-bondrona, ny fiadiana ny ho tompon- dakan'i Eoropa isan-tarika, eo amin'ny taranja baolina kitra, na ny Champions League, anio alina. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
pariziana (nitranga in-2) : Ao amin'ny vondrona C kosa, dia fandresena ny ekipa belza Anderlecht (isa 0) ao amin'ny kianja Parc des Princes anio alina, izay sady hahatafakatra ny ekipa pariziana any amin' ny ampahavalon-dalana no hahalohany azy ao amin' ny vondrona misy azy ihany koa. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Princes (nitranga in-1) : Ao amin'ny vondrona C kosa, dia fandresena ny ekipa belza Anderlecht (isa 0) ao amin'ny kianja Parc des Princes anio alina, izay sady hahatafakatra ny ekipa pariziana any amin' ny ampahavalon-dalana no hahalohany azy ao amin' ny vondrona misy azy ihany koa. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
nangirifiry (nitranga in-1) : tanaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe Firaisana ara-nofo, Fanalàn-jaza ary Fifehezantena, miverina mitodika ny lasa nangirifiry niainany ilay bilaogera tsy mitonona anarana ao amin'ny Hala/Cleo no sady manohana ihany koa ilay namany nandrita ireo dingana narahana tamin'ny fanalàn-jaza tao Ejipta. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
distrikan' (nitranga in-1) : ***Olona telo maty notifirina
Olona telo no maty notifirina noho ny fampiharana ny dina « Fohara », tany Andranovao distrikan'i Maintirano ny 25 sy ny 27 oktobra teo. (sombiny)
mariboninahitra (nitranga in-1) : Ray raha tsy izany, fanapotsirana ny zava-misy amin'ny resa-pananahana salama mba hivoaka ny kitapom-boantsika ary hanatona ny lambam-pandriana mihoson-drà eo an-davaranganantsika ho mariboninahitra. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
facebook (nitranga in-3) : facebook. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
govern (nitranga in-1) : Keith Rowley, ao anatin'ity bitsika ity :
This #Government has no mandate to continue to govern #Trinidad and #Tobago. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Galatasaray (nitranga in-1) : Raha tsy mahazo vokatra tsara izy ireo, kanefa mandresy ny FC Copenhague (isa 1) ny klioba tiorka Galatasaray anio, dia ity farany no efa isan' ny tsara toerana hiatrika ny ampahavalon-dalana. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Hanitry (nitranga in-1) : Hanitry Ny Aina. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
zon' (nitranga in-1) : Ny fanomezany volabe nikarakarana ny fifidianana akory tsy atakalo ny fiandrianam-pirenena sy ny zon'ny olona tokony hifidy. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
malalaky (nitranga in-1) : Ho fanatevenana io asa fanontana Baiboly io ihany sy hanalefahana ny vidin'izany amin'ny mpanjifa dia nanatontosa hetsika « Biblethon » tao amin'ny efitrano malalaky ny kaominin'i Mahajanga ny fikambanana Mampiely Baiboly, ny alarobia 30 oktobra lasa teo. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
nidinana (nitranga in-1) : Rehefa fantatry ny zandary mpanao famotorana ilay toerana dia nidinana tany ifotony. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
nandraisana (nitranga in-1) : «Efa nisy ny fitarainana narahina fitoriana napetrakay teny anivon'ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco ary andrasana aorian'ny fananganana io vaomiera io ny fisian'ny fampitahana ny antontan-taratasy nandraisana ireo mpiasa», araka ny tatitra nentin-dRaharovoatra Claude, Filohan'ny Sem­pama, taorian'ny hetsika notanterahin'izy ireo nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra lasa teo. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
niainany (nitranga in-1) : tanaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe Firaisana ara-nofo, Fanalàn-jaza ary Fifehezantena, miverina mitodika ny lasa nangirifiry niainany ilay bilaogera tsy mitonona anarana ao amin'ny Hala/Cleo no sady manohana ihany koa ilay namany nandrita ireo dingana narahana tamin'ny fanalàn-jaza tao Ejipta. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
politisiana (nitranga in-1) : Ireo mpitarika fivavahana mively daba manohitra ilay safidy sy ireo politisiana basha dia zara raha manana ny toerany amin'ny fandraisana manoloana ny fanapahan-kevitr'ireo vehivavy hanapaka ny fitondrany vohoka. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
hahita (nitranga in-2) : Manantena ny hahita mpividy betsabetsaka ihany anefa ireo tranombarotra rehefa vanim-potoana manakaiky faran'ny taona tahaka izao. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
fokotany (nitranga in-1) : ***Mpamily kamiao maty
Tany amin'ny hôpitaly no namoy ny ainy ny mpamily kamiao iray tra-doza tany Antsahasaribao, fokotanin' Ambodimandresy Antsohihy ny 1 novambra teo tamin'ny 4 ora hariva. (sombiny)
mpihazakazaka (nitranga in-4) : com/y0Z7GBcgMJ
— eldwin baptiste (@porkman1986) 5 Novambra 2013 Efa talohan'ny nanambaràna tamin'ny fomba ofisilay ny vokatra aza, no toy ny efa nahazo antoka avy amin'ny loharanom-baovaony ny pejy Facebook-n'ny Ccn Tvnews ka nahatonga azy hanoratra hoe : Terrence Deyalsingh mpihazakazaka avy amin'ny PNM no mpandresy tamin'ny fifidianana fisoloan-toerana tao St. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Sem­pama (nitranga in-1) : «Efa nisy ny fitarainana narahina fitoriana napetrakay teny anivon'ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco ary andrasana aorian'ny fananganana io vaomiera io ny fisian'ny fampitahana ny antontan-taratasy nandraisana ireo mpiasa», araka ny tatitra nentin-dRaharovoatra Claude, Filohan'ny Sem­pama, taorian'ny hetsika notanterahin'izy ireo nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra lasa teo. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
Afovoany (nitranga in-1) : Faran'izay zavatra tena raràn'ny lalàna ao Ejipta ny fanalàn-jaza afa-tsy hoe raha hamonjena ny ain'ilay reny, izay tranga matetika hita any amin'ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA). (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Claude (nitranga in-1) : «Efa nisy ny fitarainana narahina fitoriana napetrakay teny anivon'ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco ary andrasana aorian'ny fananganana io vaomiera io ny fisian'ny fampitahana ny antontan-taratasy nandraisana ireo mpiasa», araka ny tatitra nentin-dRaharovoatra Claude, Filohan'ny Sem­pama, taorian'ny hetsika notanterahin'izy ireo nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra lasa teo. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
nifampiresahana (nitranga in-1) : Tsy arakaraka ny zavatra nifampiresahana sy nifanekana tany am-boalohany ny zava-nisy. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
nisiana (nitranga in-1) : Raha voahaja ireo fepetra takiana, toy ny tsy fahazoana mandehandeha amina faritra vao nisiana heloka dia ahitam-bokany ny fikarohana ataon'ny alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
nangalatr' (nitranga in-1) : Ny iray voalaza fa nangalatr'omby ary ny faharoa nangalatra ny volan-drainy. (sombiny)
Evelontala (nitranga in-1) : Lietnà Evelontala Jean François, lehiben'ny sampana mpanofana alika
Nanenjika mpaka an-keriny Isan'ireo vokatra niavaka nataon'ireto alika eny Ivato ny zava-nitranga tany amin'ny lalam-pirenena faharoa, taona vitsy lasa izay. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Cecam (nitranga in-1) : Nisy namaky ny Cecam tany an-toerana. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Rabetsara (nitranga in-1) : Tsy nandray anjara rahateo i Estellah Fils Rabetsara, mpifanandrina akaiky taminy. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
nampiasaina (nitranga in-3) : Rehefa nampiasaina ny alika dia nijanona teo amin'ilay toerana avy hatrany. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Rasolonjatovo (nitranga in-1) : I Michael Rasolonjatovo (885 isa) no teo amin'ny laharana faharoa raha i Dylan Ramiakatrarivo (759 isa) no fahatelo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
française (nitranga in-2) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Fifehezantena (nitranga in-1) : tanaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe Firaisana ara-nofo, Fanalàn-jaza ary Fifehezantena, miverina mitodika ny lasa nangirifiry niainany ilay bilaogera tsy mitonona anarana ao amin'ny Hala/Cleo no sady manohana ihany koa ilay namany nandrita ireo dingana narahana tamin'ny fanalàn-jaza tao Ejipta. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
nomen' (nitranga in-2) : Tamin'ny dingana farany (Rallye Asa Tana), teo amin'ny fiadiana ny ho tompon- dakan'i Madagasikara, dia tsy nandray anjara izy ireo noho ny antony araka asa, raha ny fanazavana nomen'izy ireo. (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
nampiasàna (nitranga in-1) : Ny hajiantsary nampiasaina ato amin'ity lahatsoratra ity dia an'i Georgia Popplewell, nampiasàna ny Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
talen' (nitranga in-1) : « Toeram-pivarotana 38 no handray anjara, saingy tsy hivondrona amina toerana iray, toy ny fahita mahazatra izy ireo fa samy hivarotra eny amin'ny tsena fivarotan' izy ireo eny ihany », hoy Raharison Andry, talen'ny «Galactik communication». (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
Ivato (nitranga in-2) : Raha takian'ny mpitsabo ny hialany sasatra dia tsy miasa izy mandritra izay fotoana izay», hoy ny fanazavan'ny lehiben'ny mpikarakara ireo alika mpitsongodia eny Ivato. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
international (nitranga in-1) : hiaraka amin'ny Subaru i Hery Be amin'io fifaninanana io
Isan'ireo handray ny fiaingana amin'ny “Rallye international de Madagascar” (RIM) andiany faha-34 indray ry Hery Rasoamaromaka na i Hery Be sy Eric Ratsihoarana na i Kopela. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
sahaniny (nitranga in-1) : Hiala amin'izany fahanginana izany izy ireo, ka hiezaka ny ampahafantatra ny fikambanana amin'ny vahoaka, sy ny andraikitra sahaniny. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
nihevitra (nitranga in-1) : Marary dia marary tokoa ary sarotra ihany ny hieritreritra fa tsy nahazo afa-tsy 1 na 2 % na latsak'izany aza ny tena kanefa mba efa nihevitra fa mamim-bahoaka ery. (Bao tsy mivily-SATRIKO AZA MARATRA)
nisehoan' (nitranga in-2) : Isan'ny faritra nisehoan'ny fanafihan-jiolahy nisesisesy vao andro vitsy lasa izay ny teny Ambohijanaka sy ny manodidina azy. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
Ratsiraka (nitranga in-1) : Ho an'ireo kandidà hafa indray, toa an'i Hajo Andrianainarivelo sy Roland Ratsiraka dia nifototra kokoa tany amin'ny tsy fanekena ireo voka-pifidianana tamina birao fandatsaham- bato maromaro ny fitarainan'izy ireo. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
isafidianana (nitranga in-1) : Maro isafidianana ireo karazana zava-maneno azo ianarana. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
Hotontosaina (nitranga in-1) : Hotontosaina any amin' ny tranoben'ny fanatanjahantena, any Clermont-Ferrand, amin'ny 16 novambra ho avy izao, ny adin'izy mirahalahy ireto. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Nomontsany (nitranga in-1) : Nomontsanin' ity farany tamin'ny alalan' ny isa 42 no ho 21 ny Sporting avy eto Analamanga, omaly. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
hihambo (nitranga in-1) : Sarotra ihany koa etsy andaniny ny hihambo amin'ny hoe fifidianana mangarahara sy marina satria tsy misy mahalala izay baolina nihodinkodina tany ambany ravin-kazo rehetra tany. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
voatsikeran' (nitranga in-1) : Ny lisi-pifidianana, ny kara-pifidianana, ny fampianarana ny olona, ary indrindra ny fahataran' ny fikirakirana ny voka-pifidianana ankehitriny dia voatsikeran'ny Sefafi avokoa. (FANEHOAN-KEVITRY NY SEFAFI-« Tsy mahaleo tena ny Cenit »)
hahalohany (nitranga in-1) : Ao amin'ny vondrona C kosa, dia fandresena ny ekipa belza Anderlecht (isa 0) ao amin'ny kianja Parc des Princes anio alina, izay sady hahatafakatra ny ekipa pariziana any amin' ny ampahavalon-dalana no hahalohany azy ao amin' ny vondrona misy azy ihany koa. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
THBC (nitranga in-1) : Samy nandeha tsy nisy nahasakana kosa ny lalao natrehan'ny THBC, tompondakan'i Madagasikara sokajy vehivavy sady tompon- dakan'ny Ranomasimbe Indianina sy ny HBCT, sokajy lehilahy. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
nifototra (nitranga in-1) : Ho an'ireo kandidà hafa indray, toa an'i Hajo Andrianainarivelo sy Roland Ratsiraka dia nifototra kokoa tany amin'ny tsy fanekena ireo voka-pifidianana tamina birao fandatsaham- bato maromaro ny fitarainan'izy ireo. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
notanterahy (nitranga in-1) : «Efa nisy ny fitarainana narahina fitoriana napetrakay teny anivon'ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco ary andrasana aorian'ny fananganana io vaomiera io ny fisian'ny fampitahana ny antontan-taratasy nandraisana ireo mpiasa», araka ny tatitra nentin-dRaharovoatra Claude, Filohan'ny Sem­pama, taorian'ny hetsika notanterahin'izy ireo nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra lasa teo. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
tompondakan' (nitranga in-5) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
antsipirihan' (nitranga in-1) : Mbola notanan'izy ireo ho tsiambaratelo anefa ny antsipirihan'izany paik'ady izany. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
Communication (nitranga in-1) : raharison Andry, avy ao amin'ny Galactik Communication
Hanao fihenam-bidy, kanefa tsy misy hihetsika eny amin'ny toeram-pivarotana misy azy. (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
Patricia (nitranga in-1) : Izay andanian'ireo Parlemantera sasany 5 taona, 10 andro no nanaovako azy… “
Tsy gaga tamin'ny fihetsiky ny governemanta i Patricia Worrell, mpampiasa Facebook : Izay izany. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
hiatrehana (nitranga in-2) : Tsy hananany herijika hiatrehana ny lalao famaranana intsony ny vokatra ratsy azon'izy ireo satria ireo ekipa roa voa- lohany eo amin'ny vondrona tokana misy ekipa enina ihany no hiditra amin'ny dingana farany hahazoana miady ny anaram-boninahitra. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
fahatfatesan' (nitranga in-1) : Nahatratra 11 isan-jaton'ny fahatfatesan'ny reny tao amin'ny faritra noho ny fahasarotana avy amin'ireny fanalàn-jaza ireny. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Nitondra (nitranga in-2) : Nitondra fanazavana fisiana hosoka kosa ny teo anivon'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena (Men), taorian'ny fanadihadiana nataon'izy ireo mahakasika ny fitantanana ny fanadinam-panjakana. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
niezana (nitranga in-1) : Voalaza fa nitsambikina tamin'ilay fiara, niezana nanavotr'aina ilay mpamily. (sombiny)
handehanana (nitranga in-1) : Tsy vita tatsy Maorisy ilay izy ka izay no tsy maintsy handehanana any Frantsa. (TSY FAHASALAMANA-Handeha hitsabo tena any Frantsa ny jeneraly Ravalomanana)
dakan' (nitranga in-3) : Samy nandeha tsy nisy nahasakana kosa ny lalao natrehan'ny THBC, tompondakan'i Madagasikara sokajy vehivavy sady tompon- dakan'ny Ranomasimbe Indianina sy ny HBCT, sokajy lehilahy. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Rajaonarivelo (nitranga in-2) : Tsy ampy hanazavana ny taham-bato kely dia kely azon'ny ankamaroan'ireo kandidà ka isan'izany ireo mpanao politika goaik'antitra toa an-dry Pierrot Rajaonarivelo na ry Monja Roindefo anefa izany. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
hanazavana (nitranga in-1) : Tsy ampy hanazavana ny taham-bato kely dia kely azon'ny ankamaroan'ireo kandidà ka isan'izany ireo mpanao politika goaik'antitra toa an-dry Pierrot Rajaonarivelo na ry Monja Roindefo anefa izany. (Bao tsy mivily-SATRIKO AZA MARATRA)
boxe (nitranga in-2) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Bepc (nitranga in-1) : «Mbola tsy nahazo ny anjara tambin-karama tamin'ny fanadinana Bepc sy Cepe tamin'ny taona 2012 ny mpampianatra tsy miankina sy ny karamain'ny Fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra (Fram), raha efa nahazo izany kosa ireo mpiasam-panjakana», hoy ny fanazavana noentin-dRaheliarisoa Rondro Régine, Talen'ny Sekoly fanabeazana fototra (Epp) Nanisana. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
rihatra (nitranga in-1) : Zara aza nisy ireo lesoka marobe tamin'ny fikarakarana ny fifidianana hanilihana ny rihatra. (Bao tsy mivily-SATRIKO AZA MARATRA)
soniavy (nitranga in-1) : Ho an'izay afaka kosa dia mahazo taratasy fahazoan-dalana afaka manao ilay asa hampa­naovina azy, soniavin'ilay mpitsara. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Ndahimananjara (nitranga in-1) : Fahasalamana
Mitohy ny fanatan­terahan'ny minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka ireo tetikasa rehetra mahakasika ny fahasalamana, na dia teo aza ny fialan'ny minisitra Johanita Ndahimananjara. (TAPATAPANY)
hampiroboroboana (nitranga in-1) : Efa misy vovonana miforona eo anivon'ireo faritra sasantsasany hampiroboroboana ny fambolena tsaramaso. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
lefitry (nitranga in-1) : Amin'ity taona ity dia eto Madagasikara no hivoahan'ny anaran'izay tompondakan'i Afrika”, hoy i Adam Yachine, filoha lefitry ny federasiona malagasin'ny fanamoriana fiarakodia manazava ny antony handraisan'ireto teratany afrikanina ireto anjara amin'ny “Rallye International de Madagascar”. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
hanainga (nitranga in-1) : ny 6 novambra izao no hanainga eto an-tanindrazana ka hihazo an'i Frantsa ny jeneraly Ravalomanana Richard, kaomandin'ny Zandarimariam-pirenena. (TSY FAHASALAMANA-Handeha hitsabo tena any Frantsa ny jeneraly Ravalomanana)
nankalazàna (nitranga in-1) : Ny pejy Facebook ofisialin'ny PNM, izay efa nialoha làlana tamin'ny fanovàna ny sary fandraisany ho fiomanana amin'ilay fifidianana fisoloan-toerana, dia tsy nitsitsy fotoana nankalazàna ilay fandresena :
Arahabaina i Terrance Deyalsingh Parlemantera ho an'i St. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
fizotran' (nitranga in-1) : mangarahara sy ho eken'ny rehetra tokoa ve ny fizotran'ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny 25 oktobra lasa teo. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
handraràn' (nitranga in-1) : Hala/Cleo dia manolotra ny fandalinany ireo antony handraràn'ny lalàna ny fanalàn-jaza:
Ampiasaina ho toy ny fitaovana hifehezana ny vehivavy io. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
mory (nitranga in-1) : Ankoatra ireo dia saika mbola tafiditra ao anatin' ny lisitr'ireo mpandray anjara avokoa ireo mpana- mory nifaninana nandritra ireo dingana efatra ho an'ny fifaninanam-pirenena malagasy. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
halefa (nitranga in-1) : Rehefa halefa any amin'ny foibe ara-teknika ny fangatahana hamantarana ny niavian'ilay bala dia fantatra fotsiny hoe avy amin'ny Tafika na Polisy na Zandary ilay izy fa tsy voafaritra mazava ny toby nivoahany” hoy ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
nampandoavina (nitranga in-1) : Olona 15 hafa, voalaza fa nandray anjara tamin'ny fiotazana sy fiambenana ary fitaomana voanion'olona iray no nampandoavina vola iray hetsy ariary isan'isany. (sombiny)
hajiantsary (nitranga in-1) : Ny hajiantsary nampiasaina ato amin'ity lahatsoratra ity dia an'i Georgia Popplewell, nampiasàna ny Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
hamantarana (nitranga in-1) : Rehefa halefa any amin'ny foibe ara-teknika ny fangatahana hamantarana ny niavian'ilay bala dia fantatra fotsiny hoe avy amin'ny Tafika na Polisy na Zandary ilay izy fa tsy voafaritra mazava ny toby nivoahany” hoy ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
Nototofany (nitranga in-1) : Nototofany ravin-kininina teo amin'ny lohany ka tsy fantatra mihitsy izy. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Sefafy (nitranga in-5) : Milaza ny Sefafi fa « na eo anatrehan'ny fanjakana na eo anatrehan'ny mpamatsy vola vahiny dia tsy mahaleo tena ny Cenit ». (FANEHOAN-KEVITRY NY SEFAFI-« Tsy mahaleo tena ny Cenit »)
hitsahatra (nitranga in-1) : Tsy hitsahatra ny fitakian'ny ataon'ny Sempama mba hampanarahana fenitra ny tontolon'ny fanabeazana. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
Alleyne (nitranga in-2) : Betsaka amin'ireo fanehoankevitra avy amin'ny mpamaky an'io lahatsoratra io no nitodika tany amin'ilay hoe “petsa” izay nampanantenain'i Ian Alleyne, mpihazakazaka avy amin'ny governemanta ho an'ireo mpifanandrina aminy ara-politika. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
jeren' (nitranga in-1) : Eo no jeren'ny mpitsara ilay taratasy fahafahan'ilay alika manao ilay asa», hoy ihany ny lehiben'ny sampan-draharaha mikarakara ireo alika mpitsongodia. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
kaominy (nitranga in-1) : Ho fanatevenana io asa fanontana Baiboly io ihany sy hanalefahana ny vidin'izany amin'ny mpanjifa dia nanatontosa hetsika « Biblethon » tao amin'ny efitrano malalaky ny kaominin'i Mahajanga ny fikambanana Mampiely Baiboly, ny alarobia 30 oktobra lasa teo. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
Tafavoaka (nitranga in-1) : Tafavoaka ny lalana ary latsaka tany anaty hady ilay fiarabe noentiny. (sombiny)
Impact (nitranga in-2) : #TTPolitics #byelection #StJoseph
— Impact on Governance (@IOGTTProject) November 5, 2013 Tsy nomena fotoana intsony hanohizany hitondra an'i #Trinidad sy #Tobago ity #Government ity. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Noelson (nitranga in-1) : Nanatrika ity fihaonana ity ny profesora Tehindrazanarivelo Alain, Noelson William, Lahiniriko Jean ary Voninahitsy Jean Eugène. (Tapatapany)
hisolo (nitranga in-1) : saika mpikatroka tanora avokoa ireo hisolo tena an' i Madagasikara amin'ny “Africa open de Maurice”, eo amin'ny taranja judo, hotontosaina amin'ny 9 novambra ho avy izao, any Maorisy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
Ampiarahan' (nitranga in-1) : Ampiarahan'izy ireo amin'ny fitanana an-tsoratra mahakasika ilay raharaha any amin'ny Fitsarana indray avy eo. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
misimisy (nitranga in-1) : Nitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika izany Razafimahefa Julien, mpitsabo ny mpahaihozatatitra (neurologue) etsy Befelatanana. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
herijika (nitranga in-2) : Tsy hananany herijika hiatrehana ny lalao famaranana intsony ny vokatra ratsy azon'izy ireo satria ireo ekipa roa voa- lohany eo amin'ny vondrona tokana misy ekipa enina ihany no hiditra amin'ny dingana farany hahazoana miady ny anaram-boninahitra. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
nihavian' (nitranga in-1) : “Ekena fa misy laharana ahafahana mamantatra ny nihavian'ny bala tokoa nefa misy hatrany ny olana. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
Atallah (nitranga in-1) : Ny filohan'ny Cenit, Atallah Béatrice anefa dia milaza fa « isan'ireo tompon'andraikitra tamin'ny tsy fizarana ny kara-pifidianana ireo sefo fokontany ». (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
Baptiste (nitranga in-1) : @wgibbings @CNC3TV @tv6tnt
— John Yearwood (@john_yearwood) 5 Novambra 2013 Resy lahatra i Eldwin Baptiste fa mety hitazona ny maha-lohalaharana azy ny PNM : We got a winner #PNM #UNC #ILP is wetting after wetting #ByElection #StJoseph @tv6tnt @CNC3TV @cnewslive #PNMvictory pic. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nandrora (nitranga in-1) : Hoy i Denecia J S Boodoo :
nandrora nitsilany i ian tamin'ilay petsa[ny] Nanamafy ny fironana tany aloha ireo vokatra ofisialy navoaka ny alin'iny. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
judo (nitranga in-3) : saika mpikatroka tanora avokoa ireo hisolo tena an' i Madagasikara amin'ny “Africa open de Maurice”, eo amin'ny taranja judo, hotontosaina amin'ny 9 novambra ho avy izao, any Maorisy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
Miarinarivo (nitranga in-1) : Isan'ny vokatra tsara ihany koa ny zava-nisy tamin'ny taon-dasa tany Miarinarivo. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
hampanarahana (nitranga in-1) : Tsy hitsahatra ny fitakian'ny ataon'ny Sempama mba hampanarahana fenitra ny tontolon'ny fanabeazana. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
hanoratra (nitranga in-1) : com/y0Z7GBcgMJ
hotontosaina (nitranga in-1) : saika mpikatroka tanora avokoa ireo hisolo tena an' i Madagasikara amin'ny “Africa open de Maurice”, eo amin'ny taranja judo, hotontosaina amin'ny 9 novambra ho avy izao, any Maorisy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
People' (nitranga in-2) : Joseph – Trinidad ary – tahaka ny tamin'ny Fifidianana Governemantam-paritra vao avy nifarana tsy ela akory izao – ny People's National Movement (Hetsika Nasionalim-Bahoaka) no nivoaka ho mpandresy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Bianco (nitranga in-1) : «Efa nisy ny fitarainana narahina fitoriana napetrakay teny anivon'ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco ary andrasana aorian'ny fananganana io vaomiera io ny fisian'ny fampitahana ny antontan-taratasy nandraisana ireo mpiasa», araka ny tatitra nentin-dRaharovoatra Claude, Filohan'ny Sem­pama, taorian'ny hetsika notanterahin'izy ireo nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra lasa teo. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
Lalanomena (nitranga in-3) : noraisin'i Domoinanavalona Amboaratiana sy Lalanomena Anthony Andrianirina ny laharana voalohany eo amin'ny filaharan'ireo mpilomano malagasy, taorian'ny fifaninanana tsapa natrehan'izy ireo, tamin'ny faran'ny herinandro teo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Ratsihoarana (nitranga in-1) : hiaraka amin'ny Subaru i Hery Be amin'io fifaninanana io
hiverenan' (nitranga in-1) : Afaka manarina ihany koa ny Ces ka izay no mahatonga anay mitsangana miteny mba tsy hiverenan'ny olana aorian'ny fifidianana indray», hoy i Voninahitsy Jean Eugène. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
National (nitranga in-1) : Joseph – Trinidad ary – tahaka ny tamin'ny Fifidianana Governemantam-paritra vao avy nifarana tsy ela akory izao – ny People's National Movement (Hetsika Nasionalim-Bahoaka) no nivoaka ho mpandresy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Faralala (nitranga in-1) : Soratra : Faralala
Sary : Sergio Maryl. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
andavan' (nitranga in-2) : “Ny biby, ny habe, ny taham-panafody ambony loatra ao anatin'ny vokatra no isan'ny andavan'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra tsaramaso eto amintsika matetika. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
niasan' (nitranga in-1) : 45 taona izao no niasan'ny Foiben'ny kristianina misahana ny fahasalamana (Ccs) eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
Sarr (nitranga in-1) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Andrianjanaka (nitranga in-1) : Naka Andrianjanaka. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
hofanina (nitranga in-2) : Ny alika rehetra dia azo hofanina avokoa amin'izay itiavana azy. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
nozaray (nitranga in-1) : Sary nozarain'ilay bilaogera Hala/Cleo tao amin'ny bilaoginy. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
raharison (nitranga in-1) : raharison Andry, avy ao amin'ny Galactik Communication
fanambaràna (nitranga in-1) : ireo sefo fokontany nanao fanambaràna teny Anosy
Tapitra omaly hariva ny fe-potoana 48 ora nomen' ireo sefo fokontany sasany avy eto an-drenivohitra handravana ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (Cenit). (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
mihinana (nitranga in-1) : Raha ny fanadihadiana natao tao anatin' ny Faritra Itasy dia mihinana tsaramaso ny 100%-n'ny mponina. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
Munich (nitranga in-2) : Ny Real Madrid ao amin'ny vondrona B, ny Paris-Saint-Germain ao amin'ny vondrona C ary ny Bayern de Munich ao amin'ny vondrona D. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
ahazana (nitranga in-1) : Manampim-bava, mamolavola, mampiasa ary avy eo manao antsika ho vato natsindry ahazana. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
gitara (nitranga in-2) : Ny piano sy ny gitara no tena be mpankafy. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
Jassy (nitranga in-1) : Mahatratra 41 ireo fiarakodia hiainga avy etsy amin' ny Lapan'ny tanàna Analakely, amin'ny zoma ho avy izao, ka teratany Zambianina, Jassy Singh sy ilay Zimbaboena, Jas Mangat, no vahiny amin'izany hetsika izany. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
Akanto (nitranga in-1) : Hiaro ny voninahitry ny Malagasy atsy amin'ity Nosy rahavavy ity i Ny Akanto Rakotobe (-48 kg), Volasoa Ratsimiziva (-63 kg) ary Isilo Aïcha (-70 kg) eo amin' ny sokajy vehivavy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
narahy (nitranga in-1) : Tratra ihany koa ireo jiolahy niaraka tamin'ny ampahan'ireo vola rehefa narahin'ny alika mpitsongodia. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Kandidà (nitranga in-1) : ireo vondron'ny kandida naneho hevitra momba ny fanafoanana ny fifidianana
Kandidà ho Filoham-pirenena maromaro no tapa-kevitra nametraka fitoriana ho fanafoanana ny voka-pifidianana teny amin'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces), omaly. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
hanambatambazana (nitranga in-1) : Ireo tsy mety mifidy aza efa tsy hita izay hanambatambazana azy koa nahoana no olona te hifidy indray no sakanana. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
Dylan (nitranga in-1) : I Michael Rasolonjatovo (885 isa) no teo amin'ny laharana faharoa raha i Dylan Ramiakatrarivo (759 isa) no fahatelo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Laurent (nitranga in-2) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
after (nitranga in-1) : @wgibbings @CNC3TV @tv6tnt
fampadehanana (nitranga in-1) : «Tokony ho ampitoviana ny zonay amin'ny fanomezana iny tambin-karamam-panadinana 2012 iny satria samy niezaka tamin'ny fampadehanana ara-dalàna ny fanadinana ny tsirairay», hoy ny mpampianatra karamain'ny Fram iray eto an-drenivohitra. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
nikarakarana (nitranga in-1) : Ny fanomezany volabe nikarakarana ny fifidianana akory tsy atakalo ny fiandrianam-pirenena sy ny zon'ny olona tokony hifidy. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
naratra (nitranga in-2) : Nitifitra ireo olon-dratsy ka naratra mafy tamin'izany ny tovolahy iray izay avy nivarotra menaka jirofo. (sombiny)
bilaoginy (nitranga in-1) : Sary nozarain'ilay bilaogera Hala/Cleo tao amin'ny bilaoginy. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
ambaran' (nitranga in-1) : Araka ny ambaran'ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana Momba ny Fahasalamana, manodidina ny 1,5 tapitrisa eo ho eo ny fanalàn-jaza natao tao MENA tamin'ny 2003, tanatin'ny fepetra tsizarizary, nataonà olona tsy tsara fiofanana, na izy roa mitambatra. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Fils (nitranga in-1) : Tsy nandray anjara rahateo i Estellah Fils Rabetsara, mpifanandrina akaiky taminy. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
hitsarana (nitranga in-1) : “Sambany vao hipetraka ho fifaninanana hitsarana ny adin'ireo mpanamory afrikanina te hibata ny anaram- boninahitra ny RIM. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
fanehoankevitra (nitranga in-2) : Samy nivoahan'ny fanehoankevitra mikasika ilay vokatra daholo, avy amin'ireo mpisera anaty aterineto, na ny Twitter na ny Facebook. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nitaky (nitranga in-2) : Ireo Oniversite hafa any Shina ihany koa anefa dia efa nitaky izany saram-pianarana sy hofan-trano izany, saingy tsy mbola nanome fe-potoana fotsiny, raha ny fanazavana noentin'ireo mpianatra any an-toerana. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Rakotobe (nitranga in-2) : Hiaro ny voninahitry ny Malagasy atsy amin'ity Nosy rahavavy ity i Ny Akanto Rakotobe (-48 kg), Volasoa Ratsimiziva (-63 kg) ary Isilo Aïcha (-70 kg) eo amin' ny sokajy vehivavy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
nampandraisina (nitranga in-1) : Tokony ho nampandraisina anjara tamin'ny fampianarana ny vahoaka mahakasika ny fampiasana ilay biletà tokana koa ny fiangonana sy ny sekoly», hoy ihany ilay fanambarana. (FANEHOAN-KEVITRY NY SEFAFI-« Tsy mahaleo tena ny Cenit »)
think (nitranga in-1) : What u think. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
tale (nitranga in-1) : Anio alina no hiainga hamonjy io ady goavana io ny delegasiona malagasy, tarihin'ny filohan' ny federasiona, Solofoniaina Rafiringa Pierre sy ny tale teknika nasionaly, Joseph Randrianasolo. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
mitsahatra (nitranga in-1) : tsy mitsahatra ny mitoroka ny tsy fahatomombanan'ny fandraisana mpampianatra vaovao ny sendikan'ny mpanabe eto Madagasikara na ny Sempama. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
nanamarika (nitranga in-1) : Araka ny pejy Facebook-n'ny C News Live, Alleyne izy tenany dia nanamarika hoe :
“Nahavita zavatra betsaka aho tao anatin'ny 10 andro. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
fahataran' (nitranga in-1) : Ny lisi-pifidianana, ny kara-pifidianana, ny fampianarana ny olona, ary indrindra ny fahataran' ny fikirakirana ny voka-pifidianana ankehitriny dia voatsikeran'ny Sefafi avokoa. (FANEHOAN-KEVITRY NY SEFAFI-« Tsy mahaleo tena ny Cenit »)
mihavitsy (nitranga in-1) : « Tsy fantatray mihitsy ny antony fa dia tena mihavitsy isan-taona ny isan' ireo mividy entana. (VAROTRA-Tratry ny krizy hatramin’ ny tsenan’ny zava-maneno)
namita (nitranga in-1) : Ity farany dia namita fianarana any ivelany ka tsy afaka nandray anjara. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
pifidianana (nitranga in-1) : voka-pifidianana ofisialy
Ny 15 novambra izao no fantatra fa hivoaka amin' ny fomba ofisialy ny voka- pifidianana Filoham-pirenena fihodinana voalohany, notanterahina ny 25 oktobra teo. (Tapatapany)
What (nitranga in-1) : What u think. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
hanombohana (nitranga in-1) : Masomboly 200 taonina
Efa nisy masomboly 200 taonina naparitaka eto Analamanga, Matsiatra-Ambony sy Menabe tamin' ny herintaona hanombohana sahady io fampiroboroboana ny fanondranana io. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
hetsehana (nitranga in-1) : Rehefa hetsehana ny vatana, dia misinda ilay mangovitra. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
over (nitranga in-1) : some not so sure it's over. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
CSKA (nitranga in-1) : Mety hanara-dia azy any amin' ny dingana manaraka ny Manchester City (isa 6) raha mibata fandresena manoloana ny CSKA Moscou (isa 3). (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Kopela (nitranga in-1) : hiaraka amin'ny Subaru i Hery Be amin'io fifaninanana io
ampahitàna (nitranga in-1) : #TTPolitics #byelection #StJoseph
— Impact on Governance (@IOGTTProject) 5 Novambra 2013 Tsy tsara fiomanana hiatrika faharesena loatra raha ny governemanta, eo ampahitàna hoe tonga amin'ny laharana faharoa izay heverin'ny mpanohana sasany ho toerana mazamazana ihany ny mpihazakazaka avy aminy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Rafiringa (nitranga in-1) : Anio alina no hiainga hamonjy io ady goavana io ny delegasiona malagasy, tarihin'ny filohan' ny federasiona, Solofoniaina Rafiringa Pierre sy ny tale teknika nasionaly, Joseph Randrianasolo. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
continue (nitranga in-1) : Keith Rowley, ao anatin'ity bitsika ity :
nambarany' (nitranga in-1) : « 20 no mpampianatra piano eto aminay raha 2 kosa ireo mpamapianatra gitara », araka ny nambarany'ny sekreteran'ny ivon-toerana ara-kolontsaina malagasy sy alemana (CGM) izay fianarana mampianatra mozika etsy Antaninarenina. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
2014 (nitranga in-1) : Mieritreritra ireo mpianatra ireo fa raha tsy voaloa mialoha ny taona 2014 izany dia horoahana avokoa izy ireo. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
anatrehan' (nitranga in-4) : Milaza ny Sefafi fa « na eo anatrehan'ny fanjakana na eo anatrehan'ny mpamatsy vola vahiny dia tsy mahaleo tena ny Cenit ». (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
2011 (nitranga in-1) : « Taorian'ny tsy fahasalamana nahazo ahy ny taona 2011 dia tsy maintsy misy ny fanaraha-maso hatao any Frantsa. (TSY FAHASALAMANA-Handeha hitsabo tena any Frantsa ny jeneraly Ravalomanana)
Rasamoelina (nitranga in-1) : I Andrandraina Rakotobe (-60 kg) sy Joharinavalona Rasamoelina (-73 kg) kosa no mpikatroka lehilahy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
2013 (nitranga in-7) : Tsy hisy mihitsy ny fandoavana io tambin-karama io amin'ity taona 2013 ity raha ny fanampim-panazavana noentiny. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
2012 (nitranga in-3) : «Mbola tsy nahazo ny anjara tambin-karama tamin'ny fanadinana Bepc sy Cepe tamin'ny taona 2012 ny mpampianatra tsy miankina sy ny karamain'ny Fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra (Fram), raha efa nahazo izany kosa ireo mpiasam-panjakana», hoy ny fanazavana noentin-dRaheliarisoa Rondro Régine, Talen'ny Sekoly fanabeazana fototra (Epp) Nanisana. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
Terrence (nitranga in-1) : com/y0Z7GBcgMJ
Deyalsingh (nitranga in-2) : com/y0Z7GBcgMJ
Biblethon (nitranga in-1) : Ho fanatevenana io asa fanontana Baiboly io ihany sy hanalefahana ny vidin'izany amin'ny mpanjifa dia nanatontosa hetsika « Biblethon » tao amin'ny efitrano malalaky ny kaominin'i Mahajanga ny fikambanana Mampiely Baiboly, ny alarobia 30 oktobra lasa teo. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
kandida (nitranga in-1) : ireo vondron'ny kandida naneho hevitra momba ny fanafoanana ny fifidianana
Michael (nitranga in-1) : I Michael Rasolonjatovo (885 isa) no teo amin'ny laharana faharoa raha i Dylan Ramiakatrarivo (759 isa) no fahatelo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Maryl (nitranga in-1) : Soratra : Faralala
Herbert (nitranga in-1) : Toerana izay teo aloha dia notànan'ilay Minisitry ny Fitsarana fahiny, Herbert Volney, avy amin'ny governemanta iraisan'ny People's Partnership. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Adam (nitranga in-1) : Amin'ity taona ity dia eto Madagasikara no hivoahan'ny anaran'izay tompondakan'i Afrika”, hoy i Adam Yachine, filoha lefitry ny federasiona malagasin'ny fanamoriana fiarakodia manazava ny antony handraisan'ireto teratany afrikanina ireto anjara amin'ny “Rallye International de Madagascar”. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
Nilaza (nitranga in-2) : Tsy hanohana kandidà
Nilaza ireo kandidà nirotsaka ho Filoham-pirenena voasokajy ho “madinika” omaly teny amin'ny Hôtel Colbert Antaninarenina fa tsy hanohana kandidà izy ireo amin'ny fihodinana faharoa. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
Creative (nitranga in-1) : 0 Generic Creative Commons license. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nodoran' (nitranga in-2) : tany Ankaraobato Mampikony no nisehoan'ilay habibiana nahafaty zazakely
Vokatry ny hatezeran'ireo jiolahy dia nodoran'izy ireo ny tanàna, rehefa tsy nahazo izay nilainy izy ireo. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
Mpikatroka (nitranga in-1) : Mpikatroka maherin'ny 200 avy amina firenena 20 no handray anjara amin'io fifaninanana iraisam-pirenena io ka isan' ireny i Madagasikara. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
azon' (nitranga in-5) : Tsy ampy hanazavana ny taham-bato kely dia kely azon'ny ankamaroan'ireo kandidà ka isan'izany ireo mpanao politika goaik'antitra toa an-dry Pierrot Rajaonarivelo na ry Monja Roindefo anefa izany. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Hifototra (nitranga in-1) : Hifototra kokoa amin'ny fifidianana solom-bavambahoaka ireto farany araka ny voalaza. (Tapatapany)
Sporting (nitranga in-1) : Nomontsanin' ity farany tamin'ny alalan' ny isa 42 no ho 21 ny Sporting avy eto Analamanga, omaly. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
Joharinavalona (nitranga in-1) : I Andrandraina Rakotobe (-60 kg) sy Joharinavalona Rasamoelina (-73 kg) kosa no mpikatroka lehilahy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
hitondran' (nitranga in-1) : Fomba hafa mihitsy indray no hitondran'ny « Galactik communication » ny tsenabe varoboba karakarain'izy ireo ny 8 hatramin'ny 12 novambra ho avy izao. (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
tapakila (nitranga in-1) : Lalao valo no hotanterahana anio any amin'ireo kianja sami- hafa any Eoropa, ka ekipa telo no efa hiandrandra sahady ny hahazo tapakila hiatrehana ny ampaha- valon-dalana. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Novidiana (nitranga in-1) : Novidiana 500 000 ariary ny iray. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
mihi­tsy (nitranga in-2) : «Miandry mihi­tsy ny fanadiovana io tsy fanarahan-dalàna io vao mety hisy izany», hoy indray i Mihamitsy Cyrille. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Analanjirofo (nitranga in-1) : 600 ariary miampy rojo volamena no lasan'ny jiolahy miisa telo, tany Ankoba, kaominina ambanivohitra Ampasinamaningory Analanjirofo ny 2 novambra teo. (sombiny)
ekeny (nitranga in-2) : Lalàm-pifidianana an'ny Malagasy io ary novolavolain'ny Malagasy, ka dieny mbola mivory ireo Parlemantera mpanao lalàna, asaivo laniany sy ekeny ny fampiasana ny lisitra fanampiny sao hanahirana satria tsy hisy Malagasy hanaiky ho gisitra eo. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
hanohana (nitranga in-2) : Tsy hanohana kandidà
Generic (nitranga in-1) : 0 Generic Creative Commons license. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nahavita (nitranga in-1) : Mandainga izay sahy milaza fa nahavita izany. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
Mampikony (nitranga in-3) : tany Ankaraobato Mampikony no nisehoan'ilay habibiana nahafaty zazakely
celebrating (nitranga in-1) : Hatrany amboalohany, i @john_yearwood, mpanao gazety, dia nanontany tena raha toa nitaky seza haingana loatra ny olona :
PNM celebrating by-election win in #Trinidad. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Live (nitranga in-1) : Araka ny pejy Facebook-n'ny C News Live, Alleyne izy tenany dia nanamarika hoe :
Joseph (nitranga in-4) : Anio alina no hiainga hamonjy io ady goavana io ny delegasiona malagasy, tarihin'ny filohan' ny federasiona, Solofoniaina Rafiringa Pierre sy ny tale teknika nasionaly, Joseph Randrianasolo. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nitondra (nitranga in-1) : Nivoaka sady nananga-tanana ilay mpaka an-keriny izay nitondra basy Makarov tamin'io», hoy ny fitantaran-dRazanakoto Andriamahefa Jimmy, mpibaiko ireo alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
vitainy (nitranga in-1) : Eo ihany koa anefa ny fampitomboana ny daty hiasana, mba hampitomboana ny vola raisina: asa tokony ho vita telo andro, tsy vitainy raha tsy telo herinandro», hoy ny fanazavana noentin'ny sekretera jeneralin'ny Men, Mihamitsy Cyrille. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
Isaky (nitranga in-1) : Isaky ny tapa-bolana no hihevitra hanao ity hetsika ity ny Galactik communication ary hiezaka ny hanatratra mpandray anjara betsaka hatrany hamahana ny olan'ny fahefa-mividin'ireo mpanjifa. (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
profesora (nitranga in-1) : Nanatrika ity fihaonana ity ny profesora Tehindrazanarivelo Alain, Noelson William, Lahiniriko Jean ary Voninahitsy Jean Eugène. (Tapatapany)
Nasesy (nitranga in-1) : Nasesin'ireo olon-dratsy nodorana avy eo ireo trano hafa. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
Jiangsu (nitranga in-1) : Nilaza ireo mpianatra mianatra any fa nanapa-kevitra ny hampody ireo mpianatra ao aminy ny Oniversite any Jiangsu, raha tsy voavaha ao anatin'ny 10 andro izany olana izany. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
ofisilay (nitranga in-1) : com/y0Z7GBcgMJ
Olympiakos (nitranga in-1) : Ny Benfica sy Olympiakos kosa no hiady ny laharana faharoa, samy manana isa efatra avy izy ireo ka hamaritra izay hiara-dia amin'ny ekipa pariziana izay mandresy anio alina. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
nanokatra (nitranga in-1) : Tsikaritra anefa fa vitsy ireo kristianina nanokatra io lanonam-bavaka fanokafana ny alahady io raha oharina ny tamin'ny taon-dasa. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
Jeannot (nitranga in-1) : Mitentina 5 000 ariary eo isan'andro isaky ny alika ny vola lany amin'ny fitaizana», hoy kosa ny lietnà Rakotonarivo Jeannot, manam-pahaizana manokana momba ny alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Denecia (nitranga in-1) : Hoy i Denecia J S Boodoo :
William (nitranga in-1) : Nanatrika ity fihaonana ity ny profesora Tehindrazanarivelo Alain, Noelson William, Lahiniriko Jean ary Voninahitsy Jean Eugène. (Tapatapany)
Faravohitra (nitranga in-1) : Hisy ihany koa ny famelabelarana arahina adihevitra ny 15 novambra izao, etsy amin'ny Arrupe Faravohitra, ka mahakasika ny tontolon'ny fanalan-jaza ny lohahevitra ho dinihina amin'io, izay tsapan'izy ireo fa olana goavan'ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
Nampisambotra (nitranga in-1) : Nampisambotra lehilahy iray voatondro ho mpanolana vehivavy ary mpamaky trano sy mpanao hala-botry ny lehiben'ny mpiray dina. (sombiny)
This (nitranga in-1) : Keith Rowley, ao anatin'ity bitsika ity :
tenana (nitranga in-1) : Omaly indray dia mbola nailiky ny AS Saint-Michel, tamin'ny alalan'ny isa 30 no ho 27 izy ireo ka nahavery fanan- tenana azy ireo eo amin' ny ady ho an'ny anaram-boninahitra tompondaka. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
nanambaràna (nitranga in-1) : com/y0Z7GBcgMJ
dian' (nitranga in-1) : Nisedra olana ihany anefa ny dian' ny delegasiona malagasy saingy nandray an-tanana izany tamin'ny volany ny filohan'ny federasiona. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
nandefasan' (nitranga in-1) : “Efa nandefasan'ny masoivohon'i Madagasikara any Shina fangataham-potoana ireo Oniversite ireo saingy tsy nanaiky izany intsony”, hoy izy ireo. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
tenany (nitranga in-2) : Handeha hitsabo tena ny tenany noho ny tsy fahatomombanana ara-pahasalamana, araka ny fantatra. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
hialany (nitranga in-1) : Raha takian'ny mpitsabo ny hialany sasatra dia tsy miasa izy mandritra izay fotoana izay», hoy ny fanazavan'ny lehiben'ny mpikarakara ireo alika mpitsongodia eny Ivato. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
dingan' (nitranga in-1) : Izy no hany solontenantsika tafita eo amin'ny dingan'ny famaranana tamin'ity taona ity. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
eken' (nitranga in-2) : mangarahara sy ho eken'ny rehetra tokoa ve ny fizotran'ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny 25 oktobra lasa teo. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
Notifiry (nitranga in-1) : Notifirin'izy ireo avy eo io voarohirohy io. (sombiny)
StumbleUpon (nitranga in-2) : Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Nandika avylavitra
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
voalohan' (nitranga in-1) : Fialam-boly sy fanabezana ankizy mba tsy hirona any amin'ny zava-mahadomelina no tena tanjona voalohan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ireo tanora liana amin'ny fianarana mozika. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
Madrid (nitranga in-3) : iray amin'ireo klioba heverina hiakatra ampahavalon-dalana ny Real Madrid
tanàna (nitranga in-3) : Mahatratra 41 ireo fiarakodia hiainga avy etsy amin' ny Lapan'ny tanàna Analakely, amin'ny zoma ho avy izao, ka teratany Zambianina, Jassy Singh sy ilay Zimbaboena, Jas Mangat, no vahiny amin'izany hetsika izany. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
nanatontosa (nitranga in-1) : Ho fanatevenana io asa fanontana Baiboly io ihany sy hanalefahana ny vidin'izany amin'ny mpanjifa dia nanatontosa hetsika « Biblethon » tao amin'ny efitrano malalaky ny kaominin'i Mahajanga ny fikambanana Mampiely Baiboly, ny alarobia 30 oktobra lasa teo. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
novolavolay (nitranga in-1) : Lalàm-pifidianana an'ny Malagasy io ary novolavolain'ny Malagasy, ka dieny mbola mivory ireo Parlemantera mpanao lalàna, asaivo laniany sy ekeny ny fampiasana ny lisitra fanampiny sao hanahirana satria tsy hisy Malagasy hanaiky ho gisitra eo. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
fampiroboroboana (nitranga in-1) : Masomboly 200 taonina
Cenit (nitranga in-6) : Milaza ny Sefafi fa « na eo anatrehan'ny fanjakana na eo anatrehan'ny mpamatsy vola vahiny dia tsy mahaleo tena ny Cenit ». (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Arrupe (nitranga in-1) : Hisy ihany koa ny famelabelarana arahina adihevitra ny 15 novambra izao, etsy amin'ny Arrupe Faravohitra, ka mahakasika ny tontolon'ny fanalan-jaza ny lohahevitra ho dinihina amin'io, izay tsapan'izy ireo fa olana goavan'ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
kaomandy (nitranga in-1) : ny 6 novambra izao no hanainga eto an-tanindrazana ka hihazo an'i Frantsa ny jeneraly Ravalomanana Richard, kaomandin'ny Zandarimariam-pirenena. (TSY FAHASALAMANA-Handeha hitsabo tena any Frantsa ny jeneraly Ravalomanana)
hanalefahana (nitranga in-1) : Ho fanatevenana io asa fanontana Baiboly io ihany sy hanalefahana ny vidin'izany amin'ny mpanjifa dia nanatontosa hetsika « Biblethon » tao amin'ny efitrano malalaky ny kaominin'i Mahajanga ny fikambanana Mampiely Baiboly, ny alarobia 30 oktobra lasa teo. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
tifiriko (nitranga in-1) : Namahana basy ary ny zandary iray ary niteny tamin'ny feo mahery hoe mivoaha ao fa raha tsy izany tifiriko. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Eric (nitranga in-1) : hiaraka amin'ny Subaru i Hery Be amin'io fifaninanana io
Randriamanalina (nitranga in-1) : Tsy hihemotra izahay satria ny vahoaka izay entinay no mitaky miaraka aminay », hoy Randriamanalina Jean Marc, mpitondra tenin'ireo sefo fokontany tamin' ny antso an-tariby, omaly. (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
Nanenjika (nitranga in-1) : Lietnà Evelontala Jean François, lehiben'ny sampana mpanofana alika
misa­hana (nitranga in-1) : Ankoatra izay dia misahana andraikitra maro eny anivon'ny toeram-pitsaboana izy ireo, ary misa­hana indrindra ireo olona marefo. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
Razafimahefa (nitranga in-2) : dokotera Razafimahefa Julien, misahana ny aretina “Parkinson”
Tsy mbola be mpahafantatra raha ny aretina «Parkinson», na aretin'ny fangovitana. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
Rabarijaona (nitranga in-1) : Faharoa i Murielle Rabarijaona (959 isa) raha i Hanta Valisoa Raharvel (905 isa) no teo amin'ny laharana fahatelo ho an'ny vehivavy. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
fantatry (nitranga in-1) : Rehefa fantatry ny zandary mpanao famotorana ilay toerana dia nidinana tany ifotony. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
metaka (nitranga in-1) : Fifidianana natao faran'izay tandra- metaka sy kitoatoa. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
pianarana (nitranga in-1) : Handray anjara amin' ity hetsika ity na mpikara- kara tarehy, na toeram-pitaizana zaza, na toeram- pianarana mamily fiara… hatramin'ny mpivaro-bary, mpanao volo, toeram-pisakafoanana, »cybercafé ». (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
nampanantena (nitranga in-1) : Miantso indrindra ny fitondrana mahefa, izay efa nampanantena ny fandoavana ny vola Ar 1 400 tapitrisa mialoha ny volana septambra teo ireto mpianatra ireto, ny hitady vahaolana maika ho azy ireo. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
delicious (nitranga in-2) : Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Nandika avylavitra
lohalaharana (nitranga in-1) : Misahana manokana ny ady amin'ny gripa ny tetikasa lohalaharana amin'izao fotoana izao ary hiditra amin'ny ady amin'ny aretim-pivalanana ao aoriana kely, raha ny tatitra nataon'ny teo anivon'ny minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka. (TAPATAPANY)
Flickr (nitranga in-1) : Tsidiho ny tahirin-tsary mifandimbin'i Georgia Popplewell ao amin'ny Flickr. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
open (nitranga in-1) : saika mpikatroka tanora avokoa ireo hisolo tena an' i Madagasikara amin'ny “Africa open de Maurice”, eo amin'ny taranja judo, hotontosaina amin'ny 9 novambra ho avy izao, any Maorisy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
mpampiofana (nitranga in-3) : Misy mpampiofana iray isaky ny alika iray. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Osman (nitranga in-1) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Fram (nitranga in-3) : Mitaraina ireo mpampianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina sy ireo mpampianatra Fram noho ny tsy fitsinjovan'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena (Men) azy ireo, miohatra amin'ireo mpiasam-panjakana. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
Yearwood (nitranga in-2) : @wgibbings @CNC3TV @tv6tnt
— John Yearwood (@john_yearwood) November 5, 2013 mifety fandreseny tamin'ny fifidianana fisoloan-toerana tao #Trinidad ny #PNM. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
hanofanana (nitranga in-1) : Arakaraka izay hanofanana azy na hitsongodia na natao hitady ireo vanja milevina. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Cyrille (nitranga in-2) : Eo ihany koa anefa ny fampitomboana ny daty hiasana, mba hampitomboana ny vola raisina: asa tokony ho vita telo andro, tsy vitainy raha tsy telo herinandro», hoy ny fanazavana noentin'ny sekretera jeneralin'ny Men, Mihamitsy Cyrille. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
Antsohihy (nitranga in-1) : ***Mpamily kamiao maty
hihetsika (nitranga in-1) : raharison Andry, avy ao amin'ny Galactik Communication
Fanarahamaso (nitranga in-1) : Filazana ofisialy iray avy amin'ny Kaomisionan'ny Fifidianana sy ny Fanarahamaso no nilaza fa ilay mpihazakazaka avy amin'ny mpanohitra no nitarika tamin'ny isam-bato 779; nihoatra kelin'ny 50% amin'ny olona afaka fidiana no nifidy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Aïcha (nitranga in-1) : Hiaro ny voninahitry ny Malagasy atsy amin'ity Nosy rahavavy ity i Ny Akanto Rakotobe (-48 kg), Volasoa Ratsimiziva (-63 kg) ary Isilo Aïcha (-70 kg) eo amin' ny sokajy vehivavy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
eldwin (nitranga in-2) : com/y0Z7GBcgMJ
— eldwin baptiste (@porkman1986) November 5, 2013 Nahazo mpandresy isika #PNM #UNC petsa miha-petsa hatrany ny #ILP #ByElection #StJoseph @tv6tnt @CNC3TV @cnewslive #PNMvictory pic. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Isilo (nitranga in-1) : Hiaro ny voninahitry ny Malagasy atsy amin'ity Nosy rahavavy ity i Ny Akanto Rakotobe (-48 kg), Volasoa Ratsimiziva (-63 kg) ary Isilo Aïcha (-70 kg) eo amin' ny sokajy vehivavy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
nahazoana (nitranga in-1) : Ny zavatra rehetra nalaina tao amin'ny Facebook ao anatin'ity lahatsoratra ity ka tsy natao ho an'ny sehatry ny daholobe dia nampiasaina rehefa nahazoana alàlana. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
raràn' (nitranga in-1) : Faran'izay zavatra tena raràn'ny lalàna ao Ejipta ny fanalàn-jaza afa-tsy hoe raha hamonjena ny ain'ilay reny, izay tranga matetika hita any amin'ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA). (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Ahmed (nitranga in-1) : Mpanoratra Ahmed Awadalla · Nandika avylavitra
hofidiana (nitranga in-1) : Tadidio fa Filohan'ny Repoblika Malagasy no hofidiana fa tsy ny an'ny Vondrona Eoropeanina na an'ny Pnud, na an'ny COI, na an'ny OIF. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
raharahan' (nitranga in-1) : Tsy tokony hitsabaka amin'ny raharahan'ny Malagasy ny vahiny. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
hihevitra (nitranga in-1) : Isaky ny tapa-bolana no hihevitra hanao ity hetsika ity ny Galactik communication ary hiezaka ny hanatratra mpandray anjara betsaka hatrany hamahana ny olan'ny fahefa-mividin'ireo mpanjifa. (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
narahana (nitranga in-1) : tanaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe Firaisana ara-nofo, Fanalàn-jaza ary Fifehezantena, miverina mitodika ny lasa nangirifiry niainany ilay bilaogera tsy mitonona anarana ao amin'ny Hala/Cleo no sady manohana ihany koa ilay namany nandrita ireo dingana narahana tamin'ny fanalàn-jaza tao Ejipta. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
kinamanamana (nitranga in-1) : Kianin'izy ireo ny kinamanamana atao ao anatin'izany fandraisana mpampianatra izany. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
Rowley (nitranga in-3) : Keith Rowley, ao anatin'ity bitsika ity :
narahina (nitranga in-1) : «Efa nisy ny fitarainana narahina fitoriana napetrakay teny anivon'ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco ary andrasana aorian'ny fananganana io vaomiera io ny fisian'ny fampitahana ny antontan-taratasy nandraisana ireo mpiasa», araka ny tatitra nentin-dRaharovoatra Claude, Filohan'ny Sem­pama, taorian'ny hetsika notanterahin'izy ireo nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra lasa teo. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
Anderlecht (nitranga in-1) : Ao amin'ny vondrona C kosa, dia fandresena ny ekipa belza Anderlecht (isa 0) ao amin'ny kianja Parc des Princes anio alina, izay sady hahatafakatra ny ekipa pariziana any amin' ny ampahavalon-dalana no hahalohany azy ao amin' ny vondrona misy azy ihany koa. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Ramiakatrarivo (nitranga in-1) : I Michael Rasolonjatovo (885 isa) no teo amin'ny laharana faharoa raha i Dylan Ramiakatrarivo (759 isa) no fahatelo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
taonina (nitranga in-6) : Voalaza fa zara raha mahavokatra tsaramaso 80 000 taonina isan-taona i Madagasikara amin'izao fotoana izao, raha nihoatra ny 100 000 taonina mahery izany teo aloha. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
Boodoo (nitranga in-1) : Hoy i Denecia J S Boodoo :
November (nitranga in-3) : @wgibbings @CNC3TV @tv6tnt
ifotony (nitranga in-1) : Rehefa fantatry ny zandary mpanao famotorana ilay toerana dia nidinana tany ifotony. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
hamerenana (nitranga in-1) : Tanjona amin' ity taona ity ny hamerenana ny anaram-boninahitra very tamin'ny taon-dasa”, hoy i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Andrianjanka (nitranga in-1) : Naka Andrianjanka. (VAROTRA-Tratry ny krizy hatramin’ ny tsenan’ny zava-maneno)
basha (nitranga in-1) : Ireo mpitarika fivavahana mively daba manohitra ilay safidy sy ireo politisiana basha dia zara raha manana ny toerany amin'ny fandraisana manoloana ny fanapahan-kevitr'ireo vehivavy hanapaka ny fitondrany vohoka. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Partnership (nitranga in-1) : Toerana izay teo aloha dia notànan'ilay Minisitry ny Fitsarana fahiny, Herbert Volney, avy amin'ny governemanta iraisan'ny People's Partnership. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Shaktar (nitranga in-1) : Efa karazan'ny fiadiana ny toerana faharoa kosa ny fihaonan'ny Shaktar Donetsk sy ny Bayer Leverkusen. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
hampitomboana (nitranga in-1) : Eo ihany koa anefa ny fampitomboana ny daty hiasana, mba hampitomboana ny vola raisina: asa tokony ho vita telo andro, tsy vitainy raha tsy telo herinandro», hoy ny fanazavana noentin'ny sekretera jeneralin'ny Men, Mihamitsy Cyrille. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
Isaorana (nitranga in-1) : Isaorana ianao manokatra ny làlana mankany amin'ny fifidianana izay ho Solombavambahoaka hoavy eo. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Vakinankaratra (nitranga in-1) : Nahatratra 89 ireo mpilomano avy amina ligim-paritra efatra (Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana ary Boeny) niatrika ny fifaninanana teny amin'ny dobo filomanosana olympikan'ny ANS Ampefiloha. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Analakely (nitranga in-3) : Misy ireo manontany fotsiny fa mbola tsy tapa-kevitra ny hividy no tena betsaka », hoy ny fitarainan'i Ando, mpivarotra zava-maneno iray etsy Analakely. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
mifety (nitranga in-1) : @wgibbings @CNC3TV @tv6tnt
Trinidad (nitranga in-1) : Joseph – Trinidad ary – tahaka ny tamin'ny Fifidianana Governemantam-paritra vao avy nifarana tsy ela akory izao – ny People's National Movement (Hetsika Nasionalim-Bahoaka) no nivoaka ho mpandresy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
làlana (nitranga in-2) : Ny pejy Facebook ofisialin'ny PNM, izay efa nialoha làlana tamin'ny fanovàna ny sary fandraisany ho fiomanana amin'ilay fifidianana fisoloan-toerana, dia tsy nitsitsy fotoana nankalazàna ilay fandresena :
natrehan' (nitranga in-2) : noraisin'i Domoinanavalona Amboaratiana sy Lalanomena Anthony Andrianirina ny laharana voalohany eo amin'ny filaharan'ireo mpilomano malagasy, taorian'ny fifaninanana tsapa natrehan'izy ireo, tamin'ny faran'ny herinandro teo. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
napetrak' (nitranga in-1) : Mitaky ny fanafoanana ny fifidianana tsotr'izao izy ireo, araka ny fitoriana napetrak'izy ireo avy eny anivon'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana. (Bao tsy mivily-SATRIKO AZA MARATRA)
Leverkusen (nitranga in-1) : Efa karazan'ny fiadiana ny toerana faharoa kosa ny fihaonan'ny Shaktar Donetsk sy ny Bayer Leverkusen. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
tenako (nitranga in-3) : Raha misy mieritreritra fa hitsoaka aho dia ho diso hevitra izy satria tsy mba isan'ny olona kanosa ny tenako ka handeha hitsoaka any ivelany », hoy ity manamboninahitra jeneraly ity. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Pierrot (nitranga in-2) : Tsy ampy hanazavana ny taham-bato kely dia kely azon'ny ankamaroan'ireo kandidà ka isan'izany ireo mpanao politika goaik'antitra toa an-dry Pierrot Rajaonarivelo na ry Monja Roindefo anefa izany. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
notanan' (nitranga in-1) : Mbola notanan'izy ireo ho tsiambaratelo anefa ny antsipirihan'izany paik'ady izany. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
kirikiriana (nitranga in-1) : Mitombo kosa ny fangovitana rehefa kirikiriana na entanim-po ilay olona. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
kalazavavy (nitranga in-1) : Ilay kalazavavy teo amin' ny judo malagasy, Vola Elena Raelison, no hitarika ny delegasiona malagasy hiainga amin'ny alakamisy ho avy izao hatramin'ny 12 novambra. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
iavokoa (nitranga in-1) : Mahazo taratasy fanamarinana iavokoa ireo rehetra mahavita taom-pianarana eny anvivon'izy ireny. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
Anderlehct (nitranga in-1) : Tamin'ny lalao mandroso dia montsan' ny PSG (isa 9) 5 no ho 0 i Anderlehct. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
ampifalifaliana (nitranga in-1) : Tsy maintsy ampifalifaliana izy raha izay no mitranga. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
notontosaina (nitranga in-1) : Ny tsy fahatomombanan' ny fanomanana ny fifidi- anana sy ny voalazan' izy ireo fa tsy fanarahan-dalàna maro nandritra ny fifidianana notontosaina ny 25 oktobra teo no fototr'izay fangatahana fanafoanana ny latsa-bato rehetra izay. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Volney (nitranga in-1) : Toerana izay teo aloha dia notànan'ilay Minisitry ny Fitsarana fahiny, Herbert Volney, avy amin'ny governemanta iraisan'ny People's Partnership. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
ifaneraserana (nitranga in-1) : Ho an'ny olona izay maniry ny haka ireo alika dia voalohany indrindra tsy azo ifaneraserana ilay toerana nidiran'ireo mpangalatra na jiolahy. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
hitondra (nitranga in-1) : #TTPolitics #byelection #StJoseph
Naratra (nitranga in-1) : Naratra sy voadona mafy izy tamin'izany ka izay no nitarika ny fahafatesany. (sombiny)
isaky (nitranga in-5) : Takian'ity sendika ity ny fametrahana ilay vaomiera misahana ny fandraisana mpampianatra sy famindran-toerana isaky ny fari-piadidiam-pampianarana (Cisco). (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
hamoaka (nitranga in-1) : Mety hamoaka izay zavatra nohaniny ihany koa izy eny am-piasana. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Hihaona (nitranga in-1) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
napetraka (nitranga in-1) : «Nisy olona iray nisy naka an-keriny dia napetraka tao amin'ny trano iray efa tsy nisy nipetraka tamin'iny lalam-pirenena faharoa iny. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
ampahafantatra (nitranga in-1) : Hiala amin'izany fahanginana izany izy ireo, ka hiezaka ny ampahafantatra ny fikambanana amin'ny vahoaka, sy ny andraikitra sahaniny. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
tsinaibeny (nitranga in-1) : Misy fiantraikany hafa ihany koa anefa ny «Parkinson»: manjary miondri-dava ilay olona, mikorontana ny fiasan'ny tsinaibeny. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
sure (nitranga in-1) : some not so sure it's over. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
fiarabe (nitranga in-1) : Tafavoaka ny lalana ary latsaka tany anaty hady ilay fiarabe noentiny. (sombiny)
espanôla (nitranga in-1) : Tamin'ny lalao mandroso tany Manchester dia resy 1 no ho 0 io ekipa espanôla io. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
nanafika (nitranga in-1) : Jiolahy efatra mirongo basy no nanafika tao amin'ny tanànan'Ankarabato, fokontanin'Ambalavelona Mampikony ny sabotsy 2 novambra teo tamin'ny fito ora sy sasany hariva. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
Solution (nitranga in-1) : (53 amin'ny birao 53 ) Loharano: Solution by simulation. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Mihamitsy (nitranga in-2) : Eo ihany koa anefa ny fampitomboana ny daty hiasana, mba hampitomboana ny vola raisina: asa tokony ho vita telo andro, tsy vitainy raha tsy telo herinandro», hoy ny fanazavana noentin'ny sekretera jeneralin'ny Men, Mihamitsy Cyrille. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
Yachine (nitranga in-1) : Amin'ity taona ity dia eto Madagasikara no hivoahan'ny anaran'izay tompondakan'i Afrika”, hoy i Adam Yachine, filoha lefitry ny federasiona malagasin'ny fanamoriana fiarakodia manazava ny antony handraisan'ireto teratany afrikanina ireto anjara amin'ny “Rallye International de Madagascar”. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
hitsongodia (nitranga in-1) : Arakaraka izay hanofanana azy na hitsongodia na natao hitady ireo vanja milevina. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
nifanandrina (nitranga in-1) : Toy ny nanao fanazarantena i Lalanomena teo anatrehan'ireo mpilomano nifanandrina taminy ary nanararaotra ny tsy fandraisana anjaran'i Sitraka Ralefy, izay laharana voalohany nodimbiasiny. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
mpitson­godia (nitranga in-1) : Antony maro no fantatra fa mahatonga ny alika mpitson­godia amin'ny hariva vao omena sakafo. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Evelontaha (nitranga in-2) : Ny lietnà Evelontaha Jean François, no lehiben'ity sampana mpanofana alika mpitsongo dia ity ny volana avrily teo. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
lamba (nitranga in-1) : Ora vitsy talohan'io indray dia efa nisy fanafihana nitranga nahaverezana volamena mitetim-bidy 150 tapitrisa ariary, vola 1 tapitrisa ariary, finday 16, »lecteur » roa, »puce » fampiasa amin'ny finday 20 mahery, vary sy lamba isan-karazany tao Ambalavihy fokontany Betsingala, tao Mampikony ihany ny zoma hifoha sabotsy tamin'ny 1 ora maraina. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
Julien (nitranga in-2) : dokotera Razafimahefa Julien, misahana ny aretina “Parkinson”
Plzen (nitranga in-1) : Tsara toerana ihany koa ny Bayern Munich (isa 9) ao amin'ny vondrona D, izay mety tsy ho sahirana hanoloana ny Viktoria Plzen (isa 0) anio. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Handaniana (nitranga in-1) : Manaraka izay baiko rehetra ampanaovina azy ireo alika tsara ofana
Handaniana Ar 5 000 isan'andro «Miofana foana ny alika rehefa tsy mandeha miasa any ivelany. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Johanita (nitranga in-1) : Fahasalamana
nahaondrana (nitranga in-1) : Zara raha nahaondrana 2 000 taonina anefa isika tamin'ny taona 2011”, hoy izy. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
resahana (nitranga in-1) : Araka ny marihan'ilay bilaogera, mijanona hatrany ho lohahevitra tsy dia resahana loatra io olana io. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
asaivo (nitranga in-1) : Lalàm-pifidianana an'ny Malagasy io ary novolavolain'ny Malagasy, ka dieny mbola mivory ireo Parlemantera mpanao lalàna, asaivo laniany sy ekeny ny fampiasana ny lisitra fanampiny sao hanahirana satria tsy hisy Malagasy hanaiky ho gisitra eo. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
Andrianirina (nitranga in-1) : noraisin'i Domoinanavalona Amboaratiana sy Lalanomena Anthony Andrianirina ny laharana voalohany eo amin'ny filaharan'ireo mpilomano malagasy, taorian'ny fifaninanana tsapa natrehan'izy ireo, tamin'ny faran'ny herinandro teo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
mpi­tsongodia (nitranga in-1) : 40 taona lasa izay no nijoroan'ny sampana manokana mikarakara ireo alika mpi­tsongodia eo anivon'ny zandarimariam-pirenena. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
fahatomombanana (nitranga in-2) : Marina tokoa aloha fa dia nisy ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fikarakarana ny fifidianana, fa indrindra ny teo amin'ny lisi-pifidianana. (TSY FAHASALAMANA-Handeha hitsabo tena any Frantsa ny jeneraly Ravalomanana)
Colbert (nitranga in-1) : Tsy hanohana kandidà
nifanarahana (nitranga in-1) : Efa nifanarahana rahateo fa hoe hanara-maso fotsiny izy ireo fa tsy hiditra lalina akory. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
Roland (nitranga in-1) : Ho an'ireo kandidà hafa indray, toa an'i Hajo Andrianainarivelo sy Roland Ratsiraka dia nifototra kokoa tany amin'ny tsy fanekena ireo voka-pifidianana tamina birao fandatsaham- bato maromaro ny fitarainan'izy ireo. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
olympikan' (nitranga in-1) : Nahatratra 89 ireo mpilomano avy amina ligim-paritra efatra (Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana ary Boeny) niatrika ny fifaninanana teny amin'ny dobo filomanosana olympikan'ny ANS Ampefiloha. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Niasa (nitranga in-1) : Niasa mangina hatramin'izay ny Ccs. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
ahafahana (nitranga in-1) : “Ekena fa misy laharana ahafahana mamantatra ny nihavian'ny bala tokoa nefa misy hatrany ny olana. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
Makarov (nitranga in-1) : Nivoaka sady nananga-tanana ilay mpaka an-keriny izay nitondra basy Makarov tamin'io», hoy ny fitantaran-dRazanakoto Andriamahefa Jimmy, mpibaiko ireo alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
takian' (nitranga in-1) : Raha takian'ny mpitsabo ny hialany sasatra dia tsy miasa izy mandritra izay fotoana izay», hoy ny fanazavan'ny lehiben'ny mpikarakara ireo alika mpitsongodia eny Ivato. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
nahasehaka (nitranga in-1) : Azo antoka mantsy fa tsy nahasehaka ny fanaraha-maso ireo birao fandatsaham-bato 20 001 na ireo mpanara-maso vahiny na ireo solontenan'ny kandidà isanisany. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
nahaverezana (nitranga in-1) : Ora vitsy talohan'io indray dia efa nisy fanafihana nitranga nahaverezana volamena mitetim-bidy 150 tapitrisa ariary, vola 1 tapitrisa ariary, finday 16, »lecteur » roa, »puce » fampiasa amin'ny finday 20 mahery, vary sy lamba isan-karazany tao Ambalavihy fokontany Betsingala, tao Mampikony ihany ny zoma hifoha sabotsy tamin'ny 1 ora maraina. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
Zambianina (nitranga in-1) : Mahatratra 41 ireo fiarakodia hiainga avy etsy amin' ny Lapan'ny tanàna Analakely, amin'ny zoma ho avy izao, ka teratany Zambianina, Jassy Singh sy ilay Zimbaboena, Jas Mangat, no vahiny amin'izany hetsika izany. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
winner (nitranga in-1) : @wgibbings @CNC3TV @tv6tnt
Galactik (nitranga in-3) : raharison Andry, avy ao amin'ny Galactik Communication
Velombola (nitranga in-1) : Nomarihin'i Velombola Second Modeste sahady anefa fa masiaka ny tsena iraisam-pirenena. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
Ambohidahy (nitranga in-1) : Araka ny fantatra teny an-toerana dia mahatratra 12 ireo fitarainana voarain' ny Ces eny Ambohidahy. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
bohan' (nitranga in-1) : Ny 28 novambra kosa no fanom- bohan'ny fampielezan- kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka. (Tapatapany)
kevitra (nitranga in-1) : Ny 28 novambra kosa no fanom- bohan'ny fampielezan- kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka. (Tapatapany)
horoahana (nitranga in-1) : Mieritreritra ireo mpianatra ireo fa raha tsy voaloa mialoha ny taona 2014 izany dia horoahana avokoa izy ireo. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
piano (nitranga in-2) : Ny piano sy ny gitara no tena be mpankafy. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
Antsahasaribao (nitranga in-1) : ***Mpamily kamiao maty
Velombolo (nitranga in-1) : Ambony ny tahana vy sy ‘'zinc ao anatiny”, hoy i Velombolo Second Modeste, mpikaroka eo anivon'ny foibem-pirenena misahana ny fikarohana ampiharina amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra (Fofifa). (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
traikefa (nitranga in-1) : Isan'ny nanampy azy ny traikefa azony tany amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, tamin' ny volana aogositra, tany Barcelone. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
fahatomombanan' (nitranga in-4) : Ankoatra ny tsy fahatomombanan'ny fifidianana dia voakiana ihany koa ny fihetsik'ireo masoivoho vahiny. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
tsenabe (nitranga in-1) : Fomba hafa mihitsy indray no hitondran'ny « Galactik communication » ny tsenabe varoboba karakarain'izy ireo ny 8 hatramin'ny 12 novambra ho avy izao. (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
manantombo (nitranga in-1) : Manomboka amin'ny Ar 100 000 ka hatramin'ny Ar 700 000 ny vidin'ireo fahitalavitra ary 20 isan-kerinandro eo ho eo no lafo raha manantombo kely ny isany teo aloha. (VAROTRA-Tratry ny krizy hatramin’ ny tsenan’ny zava-maneno)
hiasana (nitranga in-1) : Eo ihany koa anefa ny fampitomboana ny daty hiasana, mba hampitomboana ny vola raisina: asa tokony ho vita telo andro, tsy vitainy raha tsy telo herinandro», hoy ny fanazavana noentin'ny sekretera jeneralin'ny Men, Mihamitsy Cyrille. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
hirehareha (nitranga in-1) : Aoka hazava raha maro no very zo tsy afaka nifidy, tsy tokony hirehareha mihitsy ny Vaompieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Cenit), na ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) na ihany koa ny governemanta fa hoe eken'ny rehetra ny fifidianana. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
tatsy (nitranga in-1) : Tsy vita tatsy Maorisy ilay izy ka izay no tsy maintsy handehanana any Frantsa. (TSY FAHASALAMANA-Handeha hitsabo tena any Frantsa ny jeneraly Ravalomanana)
Eldwin (nitranga in-1) : @wgibbings @CNC3TV @tv6tnt
mpikatroka (nitranga in-2) : saika mpikatroka tanora avokoa ireo hisolo tena an' i Madagasikara amin'ny “Africa open de Maurice”, eo amin'ny taranja judo, hotontosaina amin'ny 9 novambra ho avy izao, any Maorisy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
voarohirohy (nitranga in-1) : Notifirin'izy ireo avy eo io voarohirohy io. (sombiny)
Ankaraobato (nitranga in-1) : tany Ankaraobato Mampikony no nisehoan'ilay habibiana nahafaty zazakely
hiomanana (nitranga in-1) : Manana folo andro izy ireo hiomanana any an-toerana. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Worrell (nitranga in-1) : Izay andanian'ireo Parlemantera sasany 5 taona, 10 andro no nanaovako azy… “
hotanterahana (nitranga in-1) : Lalao valo no hotanterahana anio any amin'ireo kianja sami- hafa any Eoropa, ka ekipa telo no efa hiandrandra sahady ny hahazo tapakila hiatrehana ny ampaha- valon-dalana. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
takiana (nitranga in-1) : Raha voahaja ireo fepetra takiana, toy ny tsy fahazoana mandehandeha amina faritra vao nisiana heloka dia ahitam-bokany ny fikarohana ataon'ny alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
sendikan' (nitranga in-1) : tsy mitsahatra ny mitoroka ny tsy fahatomombanan'ny fandraisana mpampianatra vaovao ny sendikan'ny mpanabe eto Madagasikara na ny Sempama. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
hijoroanay (nitranga in-1) : Noho ny foto-kevitra hijoroanay izay mivelatra ao anatin'ny fifanampiana, fiarovana ny aina, dia mizaha fahasalamana sy mitsapa tosi-dra maimaim-poana izahay. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
nandalovany (nitranga in-1) : Amin'ireny fanafihana rehetra ireny dia misy ny vodim-bala noraofin'ny zandary tamin'ny fotoana nandalovany teny, saingy tsy mety hita mazava izay tena fihaviany. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
ahafahan' (nitranga in-1) : Haharitra dimy andro ny hetsika ahafahan'ireo tsara sitrapo manolotra izay foiny hanohanana ny fanontana. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
Manchester (nitranga in-3) : Ao amin'ny vondrona A, dia mbola mila miady mafy ny Manchester United (isa 7) na dia ho tsara toerana ihany aza raha mandresy ny Real Sociedad (isa 0) any an-tanin'ity farany, anio. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
apetraky (nitranga in-1) : Tanjona ny hahafahana miditra eo amin' ny filaharana apetraky ny federasiona iraisam-pirenen'ny judo. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
ireto (nitranga in-7) : Hifototra kokoa amin'ny fifidianana solom-bavambahoaka ireto farany araka ny voalaza. (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
solontenan' (nitranga in-1) : Azo antoka mantsy fa tsy nahasehaka ny fanaraha-maso ireo birao fandatsaham-bato 20 001 na ireo mpanara-maso vahiny na ireo solontenan'ny kandidà isanisany. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
nirarakompana (nitranga in-1) : nirarakompana indray ny fanakianan'ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi) tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo omaly mahakasika ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (Cenit). (FANEHOAN-KEVITRY NY SEFAFI-« Tsy mahaleo tena ny Cenit »)
nadika (nitranga in-2) : Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Nandika avylavitra
Tvnews (nitranga in-1) : com/y0Z7GBcgMJ
Afrika (nitranga in-1) : Faran'izay zavatra tena raràn'ny lalàna ao Ejipta ny fanalàn-jaza afa-tsy hoe raha hamonjena ny ain'ilay reny, izay tranga matetika hita any amin'ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA). (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
lietnà (nitranga in-3) : Ny lietnà Evelontaha Jean François, no lehiben'ity sampana mpanofana alika mpitsongo dia ity ny volana avrily teo. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
vondron' (nitranga in-2) : Niditra an-tsehatra ihany koa ny vondron'ny zandary ao amin'ny GSIS satria nitam-basy ny mpaka an-keriny. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
nivoahan' (nitranga in-1) : Samy nivoahan'ny fanehoankevitra mikasika ilay vokatra daholo, avy amin'ireo mpisera anaty aterineto, na ny Twitter na ny Facebook. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
John (nitranga in-2) : @wgibbings @CNC3TV @tv6tnt
Parc (nitranga in-1) : Ao amin'ny vondrona C kosa, dia fandresena ny ekipa belza Anderlecht (isa 0) ao amin'ny kianja Parc des Princes anio alina, izay sady hahatafakatra ny ekipa pariziana any amin' ny ampahavalon-dalana no hahalohany azy ao amin' ny vondrona misy azy ihany koa. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
laniany (nitranga in-1) : Lalàm-pifidianana an'ny Malagasy io ary novolavolain'ny Malagasy, ka dieny mbola mivory ireo Parlemantera mpanao lalàna, asaivo laniany sy ekeny ny fampiasana ny lisitra fanampiny sao hanahirana satria tsy hisy Malagasy hanaiky ho gisitra eo. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
isanisany (nitranga in-1) : Azo antoka mantsy fa tsy nahasehaka ny fanaraha-maso ireo birao fandatsaham-bato 20 001 na ireo mpanara-maso vahiny na ireo solontenan'ny kandidà isanisany. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
namoaka (nitranga in-1) : Tamin'ny 2009, ilay sangany amin'ireo tampom-pahaizana ara-pivavahana amin'ny Silamo ao Ejipta dia namoaka fatwa iray (didy ara-pivavahana) hanomezana alàlana ny vehivavy hanao fanalàn-jaza raha toa ka niharan'ny fanolanana. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
alàlana (nitranga in-2) : Ny zavatra rehetra nalaina tao amin'ny Facebook ao anatin'ity lahatsoratra ity ka tsy natao ho an'ny sehatry ny daholobe dia nampiasaina rehefa nahazoana alàlana. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
nampanantenay (nitranga in-1) : Betsaka amin'ireo fanehoankevitra avy amin'ny mpamaky an'io lahatsoratra io no nitodika tany amin'ilay hoe “petsa” izay nampanantenain'i Ian Alleyne, mpihazakazaka avy amin'ny governemanta ho an'ireo mpifanandrina aminy ara-politika. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nihodinkodina (nitranga in-1) : Sarotra ihany koa etsy andaniny ny hihambo amin'ny hoe fifidianana mangarahara sy marina satria tsy misy mahalala izay baolina nihodinkodina tany ambany ravin-kazo rehetra tany. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
hanohizany (nitranga in-1) : #TTPolitics #byelection #StJoseph
karamay (nitranga in-2) : «Mbola tsy nahazo ny anjara tambin-karama tamin'ny fanadinana Bepc sy Cepe tamin'ny taona 2012 ny mpampianatra tsy miankina sy ny karamain'ny Fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra (Fram), raha efa nahazo izany kosa ireo mpiasam-panjakana», hoy ny fanazavana noentin-dRaheliarisoa Rondro Régine, Talen'ny Sekoly fanabeazana fototra (Epp) Nanisana. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
wetting (nitranga in-2) : @wgibbings @CNC3TV @tv6tnt
Rakotondrabe (nitranga in-2) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Benfica (nitranga in-1) : Ny Benfica sy Olympiakos kosa no hiady ny laharana faharoa, samy manana isa efatra avy izy ireo ka hamaritra izay hiara-dia amin'ny ekipa pariziana izay mandresy anio alina. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
reddit (nitranga in-2) : Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Nandika avylavitra
voavaha (nitranga in-1) : Nilaza ireo mpianatra mianatra any fa nanapa-kevitra ny hampody ireo mpianatra ao aminy ny Oniversite any Jiangsu, raha tsy voavaha ao anatin'ny 10 andro izany olana izany. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
hifehezana (nitranga in-1) : Hala/Cleo dia manolotra ny fandalinany ireo antony handraràn'ny lalàna ny fanalàn-jaza:
nambara (nitranga in-1) : Ny hany nambara dia hisy ny fanamafisana ny fisafoana hatao amin'ny antoandro sy alina. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
Lietnà (nitranga in-1) : Lietnà Evelontala Jean François, lehiben'ny sampana mpanofana alika
mibaiko (nitranga in-2) : Raha olon-kafa no manome sakafo azy na mibaiko azy dia tsy manaraka mihi­tsy izy. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
noenty (nitranga in-2) : Eo ihany koa anefa ny fampitomboana ny daty hiasana, mba hampitomboana ny vola raisina: asa tokony ho vita telo andro, tsy vitainy raha tsy telo herinandro», hoy ny fanazavana noentin'ny sekretera jeneralin'ny Men, Mihamitsy Cyrille. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
ataon' (nitranga in-3) : Tsy hitsahatra ny fitakian'ny ataon'ny Sempama mba hampanarahana fenitra ny tontolon'ny fanabeazana. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
hoavy (nitranga in-1) : Isaorana ianao manokatra ny làlana mankany amin'ny fifidianana izay ho Solombavambahoaka hoavy eo. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
karakaray (nitranga in-1) : Fomba hafa mihitsy indray no hitondran'ny « Galactik communication » ny tsenabe varoboba karakarain'izy ireo ny 8 hatramin'ny 12 novambra ho avy izao. (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
niondrika (nitranga in-1) : Tamin'ny lalao voa- lohany dia niondrika teo anatrehan'ny HBCT, avy any Toliara ihany tamin'ny alalan'ny isa 27 no ho 20 ny ekipan'ny Fo Masina avy any Toliara. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
kandidà (nitranga in-11) : manomboka mampiaka-peo amin'izay ireo kandidà zara fa nahazo vato tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena, fihodinana voalohany notanterahina ny 25 oktobra teo. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
navadika (nitranga in-1) : Kanefa, tsy navadika ho lalàna velively izany. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
license (nitranga in-1) : 0 Generic Creative Commons license. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
fanatan­terahan' (nitranga in-1) : Fahasalamana
voasambotr' (nitranga in-1) : Mbola nisy olona roa hafa koa voasambotr'ireo mpiray dina ka natao tahaka izay ihany koa. (sombiny)
Parkinson (nitranga in-3) : Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny andavan'androm-piainan'ireo izay tratrany anefa ny aretina Parkinson. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
natsindry (nitranga in-1) : Manampim-bava, mamolavola, mampiasa ary avy eo manao antsika ho vato natsindry ahazana. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Ankavitsiana (nitranga in-1) : Ankavitsiana kosa ireo izay mianatra mba hatao ho fitadiavam-bola. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
nanaovako (nitranga in-1) : Izay andanian'ireo Parlemantera sasany 5 taona, 10 andro no nanaovako azy… “
Notadiavy (nitranga in-1) : Notadiavin'izy ireo fa tsy hita io mpanam-bola io ka nodoran'ireo jiolahy ny tranony. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
tranombarotra (nitranga in-2) : ireo fitaovana mampidoboka feo no tena be mpividy amin'izao
Mazàna rehefa akaiky fety toy izao dia ahitana fiakarana misongadina ny isan'ny entana lafon'ireo tranombarotra zava-maneno raha ho an'ny eto an-drenivohitra manokana. (VAROTRA-Tratry ny krizy hatramin’ ny tsenan’ny zava-maneno)
nifarana (nitranga in-1) : Joseph – Trinidad ary – tahaka ny tamin'ny Fifidianana Governemantam-paritra vao avy nifarana tsy ela akory izao – ny People's National Movement (Hetsika Nasionalim-Bahoaka) no nivoaka ho mpandresy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Terrance (nitranga in-1) : Ny pejy Facebook ofisialin'ny PNM, izay efa nialoha làlana tamin'ny fanovàna ny sary fandraisany ho fiomanana amin'ilay fifidianana fisoloan-toerana, dia tsy nitsitsy fotoana nankalazàna ilay fandresena :
Modeste (nitranga in-2) : Ambony ny tahana vy sy ‘'zinc ao anatiny”, hoy i Velombolo Second Modeste, mpikaroka eo anivon'ny foibem-pirenena misahana ny fikarohana ampiharina amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra (Fofifa). (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
Andranovao (nitranga in-1) : ***Olona telo maty notifirina
avrily (nitranga in-1) : Ny lietnà Evelontaha Jean François, no lehiben'ity sampana mpanofana alika mpitsongo dia ity ny volana avrily teo. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Popplewell (nitranga in-2) : Ny hajiantsary nampiasaina ato amin'ity lahatsoratra ity dia an'i Georgia Popplewell, nampiasàna ny Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nataon' (nitranga in-4) : nirarakompana indray ny fanakianan'ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi) tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo omaly mahakasika ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (Cenit). (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
solontenantsika (nitranga in-1) : Izy no hany solontenantsika tafita eo amin'ny dingan'ny famaranana tamin'ity taona ity. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Turin (nitranga in-1) : Ho an'ny vondrona B, dia azo lazaina ho herijika farany ny an'ny Juventus de Turin (isa 2) anio raha hampiantrano ny Real Madrid (isa 9) izy ireo rehefa resin'ity farany 2 no ho 1 tamin'ny lalao mandroso. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Movement (nitranga in-1) : Joseph – Trinidad ary – tahaka ny tamin'ny Fifidianana Governemantam-paritra vao avy nifarana tsy ela akory izao – ny People's National Movement (Hetsika Nasionalim-Bahoaka) no nivoaka ho mpandresy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Richard (nitranga in-1) : ny 6 novambra izao no hanainga eto an-tanindrazana ka hihazo an'i Frantsa ny jeneraly Ravalomanana Richard, kaomandin'ny Zandarimariam-pirenena. (TSY FAHASALAMANA-Handeha hitsabo tena any Frantsa ny jeneraly Ravalomanana)
Solofoniaina (nitranga in-1) : Anio alina no hiainga hamonjy io ady goavana io ny delegasiona malagasy, tarihin'ny filohan' ny federasiona, Solofoniaina Rafiringa Pierre sy ny tale teknika nasionaly, Joseph Randrianasolo. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
notanterahina (nitranga in-2) : manomboka mampiaka-peo amin'izay ireo kandidà zara fa nahazo vato tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena, fihodinana voalohany notanterahina ny 25 oktobra teo. (Tapatapany)
Pnud (nitranga in-1) : Tadidio fa Filohan'ny Repoblika Malagasy no hofidiana fa tsy ny an'ny Vondrona Eoropeanina na an'ny Pnud, na an'ny COI, na an'ny OIF. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
marobe (nitranga in-2) : Zara aza nisy ireo lesoka marobe tamin'ny fikarakarana ny fifidianana hanilihana ny rihatra. (FANEHOAN-KEVITRY NY SEFAFI-« Tsy mahaleo tena ny Cenit »)
mazàna (nitranga in-1) : Hatrizay anefa dia mazàna ny antsasak'io filàna io ihany no voavaly eto amintsika. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
Viktoria (nitranga in-1) : Tsara toerana ihany koa ny Bayern Munich (isa 9) ao amin'ny vondrona D, izay mety tsy ho sahirana hanoloana ny Viktoria Plzen (isa 0) anio. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
hahatafakatra (nitranga in-1) : Ao amin'ny vondrona C kosa, dia fandresena ny ekipa belza Anderlecht (isa 0) ao amin'ny kianja Parc des Princes anio alina, izay sady hahatafakatra ny ekipa pariziana any amin' ny ampahavalon-dalana no hahalohany azy ao amin' ny vondrona misy azy ihany koa. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Roméo (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Ampefiloha (nitranga in-1) : Nahatratra 89 ireo mpilomano avy amina ligim-paritra efatra (Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana ary Boeny) niatrika ny fifaninanana teny amin'ny dobo filomanosana olympikan'ny ANS Ampefiloha. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Tovonen (nitranga in-1) : Toy izany ihany koa i Tovonen sy Dom, mifaninana miady eo amin'ny sokajy M11. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
sasantsasany (nitranga in-1) : Efa misy vovonana miforona eo anivon'ireo faritra sasantsasany hampiroboroboana ny fambolena tsaramaso. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
fiara (nitranga in-1) : Voalaza fa nitsambikina tamin'ilay fiara, niezana nanavotr'aina ilay mpamily. (sombiny)
Georgia (nitranga in-2) : Ny hajiantsary nampiasaina ato amin'ity lahatsoratra ity dia an'i Georgia Popplewell, nampiasàna ny Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Ralefy (nitranga in-1) : Toy ny nanao fanazarantena i Lalanomena teo anatrehan'ireo mpilomano nifanandrina taminy ary nanararaotra ny tsy fandraisana anjaran'i Sitraka Ralefy, izay laharana voalohany nodimbiasiny. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
voakasik' (nitranga in-1) : Na ny Cenit na ny manampahefana voakasik'io fitakiana io dia samy tsy nisy niraharaha avokoa izay fitakiana izay. (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
Ankoba (nitranga in-1) : 600 ariary miampy rojo volamena no lasan'ny jiolahy miisa telo, tany Ankoba, kaominina ambanivohitra Ampasinamaningory Analanjirofo ny 2 novambra teo. (sombiny)
hampiharina (nitranga in-1) : hisy paik'ady vaovao hampiharina amin'ny fitandroana ny filaminana sy hiadiana amin'ny asan-jiolahy eto an-drenivohitra, raha ny tapak'ireo tompon'andraikitry ny zandarimaria amin'ny vondron-tobim-paritra Antananarivo renivohitra, nivory maika omaly teny Ankadilalana. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
Sempama (nitranga in-2) : tsy mitsahatra ny mitoroka ny tsy fahatomombanan'ny fandraisana mpampianatra vaovao ny sendikan'ny mpanabe eto Madagasikara na ny Sempama. (SEMPAMA-Miandrandra mafy ilay vaomiera mi­sahana ny fandrai­sana mpiasa)
handravana (nitranga in-1) : ireo sefo fokontany nanao fanambaràna teny Anosy
Roindefo (nitranga in-3) : Tsy ampy hanazavana ny taham-bato kely dia kely azon'ny ankamaroan'ireo kandidà ka isan'izany ireo mpanao politika goaik'antitra toa an-dry Pierrot Rajaonarivelo na ry Monja Roindefo anefa izany. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
alemana (nitranga in-2) : « 20 no mpampianatra piano eto aminay raha 2 kosa ireo mpamapianatra gitara », araka ny nambarany'ny sekreteran'ny ivon-toerana ara-kolontsaina malagasy sy alemana (CGM) izay fianarana mampianatra mozika etsy Antaninarenina. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
ahatongavanay (nitranga in-1) : Ilay olona niharam-boina kosa no miantoka ny fomba ahatongavanay any amin'ilay toerana. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Raelison (nitranga in-1) : Ilay kalazavavy teo amin' ny judo malagasy, Vola Elena Raelison, no hitarika ny delegasiona malagasy hiainga amin'ny alakamisy ho avy izao hatramin'ny 12 novambra. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
Bayern (nitranga in-2) : Ny Real Madrid ao amin'ny vondrona B, ny Paris-Saint-Germain ao amin'ny vondrona C ary ny Bayern de Munich ao amin'ny vondrona D. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
filàna (nitranga in-1) : Hatrizay anefa dia mazàna ny antsasak'io filàna io ihany no voavaly eto amintsika. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
nisesisesy (nitranga in-1) : Isan'ny faritra nisehoan'ny fanafihan-jiolahy nisesisesy vao andro vitsy lasa izay ny teny Ambohijanaka sy ny manodidina azy. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
googleplus (nitranga in-2) : Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Nandika avylavitra
Régine (nitranga in-1) : «Mbola tsy nahazo ny anjara tambin-karama tamin'ny fanadinana Bepc sy Cepe tamin'ny taona 2012 ny mpampianatra tsy miankina sy ny karamain'ny Fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra (Fram), raha efa nahazo izany kosa ireo mpiasam-panjakana», hoy ny fanazavana noentin-dRaheliarisoa Rondro Régine, Talen'ny Sekoly fanabeazana fototra (Epp) Nanisana. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
ekipan' (nitranga in-1) : Tamin'ny lalao voa- lohany dia niondrika teo anatrehan'ny HBCT, avy any Toliara ihany tamin'ny alalan'ny isa 27 no ho 20 ny ekipan'ny Fo Masina avy any Toliara. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
vitan' (nitranga in-1) : Fikarohana jiolahy ihany aloha hatreto no vitan'ireo alika enina ao amin'ity sampana ity. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Donetsk (nitranga in-1) : Efa karazan'ny fiadiana ny toerana faharoa kosa ny fihaonan'ny Shaktar Donetsk sy ny Bayer Leverkusen. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
nodorana (nitranga in-1) : Nasesin'ireo olon-dratsy nodorana avy eo ireo trano hafa. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
Fohara (nitranga in-1) : ***Olona telo maty notifirina
Janine (nitranga in-1) : Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Nandika avylavitra
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
fanovàna (nitranga in-1) : Ny pejy Facebook ofisialin'ny PNM, izay efa nialoha làlana tamin'ny fanovàna ny sary fandraisany ho fiomanana amin'ilay fifidianana fisoloan-toerana, dia tsy nitsitsy fotoana nankalazàna ilay fandresena :
hampiharana (nitranga in-1) : Toerana hampiharana an' io fepetra vaovao io, araka izany ny eny. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
City (nitranga in-1) : Mety hanara-dia azy any amin' ny dingana manaraka ny Manchester City (isa 6) raha mibata fandresena manoloana ny CSKA Moscou (isa 3). (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Raharison (nitranga in-1) : « Toeram-pivarotana 38 no handray anjara, saingy tsy hivondrona amina toerana iray, toy ny fahita mahazatra izy ireo fa samy hivarotra eny amin'ny tsena fivarotan' izy ireo eny ihany », hoy Raharison Andry, talen'ny «Galactik communication». (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
nofanina (nitranga in-1) : Mpitsara no manome alalana
Tsy izay alika mpitsongodia avy nofanina akory dia afaka miasa eo anivon'ny zandary avokoa. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
nahatonga (nitranga in-2) : « Ilaina ny hanaovana fanadihadiana lalina mihitsy ka ahitana izay tena antony nahatonga ireny lesoka tamin' ny fikarakarana ny fifidianana ireny. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
fidiana (nitranga in-1) : Filazana ofisialy iray avy amin'ny Kaomisionan'ny Fifidianana sy ny Fanarahamaso no nilaza fa ilay mpihazakazaka avy amin'ny mpanohitra no nitarika tamin'ny isam-bato 779; nihoatra kelin'ny 50% amin'ny olona afaka fidiana no nifidy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
hevery (nitranga in-1) : #TTPolitics #byelection #StJoseph
Kaomisionan' (nitranga in-1) : Filazana ofisialy iray avy amin'ny Kaomisionan'ny Fifidianana sy ny Fanarahamaso no nilaza fa ilay mpihazakazaka avy amin'ny mpanohitra no nitarika tamin'ny isam-bato 779; nihoatra kelin'ny 50% amin'ny olona afaka fidiana no nifidy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
Hofanina (nitranga in-1) : Hofanina amam-bolana
Amam-bolana ny fotoana ilaina amin'ny fibaikoana ny alika iray. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Betsingala (nitranga in-1) : Ora vitsy talohan'io indray dia efa nisy fanafihana nitranga nahaverezana volamena mitetim-bidy 150 tapitrisa ariary, vola 1 tapitrisa ariary, finday 16, »lecteur » roa, »puce » fampiasa amin'ny finday 20 mahery, vary sy lamba isan-karazany tao Ambalavihy fokontany Betsingala, tao Mampikony ihany ny zoma hifoha sabotsy tamin'ny 1 ora maraina. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
navoakan' (nitranga in-1) : Mitaky ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra ireo valim-pifidianana amin'ireo toerana ireo izy ireo noho izany satria mifanipaka mihitsy ny vokatra eo am-pelantanan'ireo kandidà ireo sy ny navoakan'ny Cenit. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Asco (nitranga in-1) : faharesena indroa nisesy no vokatra azon'ny Asco, avy any Toliara, teo amin' ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara ho an'ny handball, sokajy lehilahy. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
mampanao (nitranga in-1) : Rehefa vita ny fiofanana dia misy mpi­tsara avy amin'ny Fitsarana mampanao ny fanadinana ireo alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
tratran' (nitranga in-4) : Ankehitriny dia tratran'ny krizy ihany koa ity tsena iray ity ka mitaraina ho zara fa mahalafo ireo mpivarotra. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
Shina (nitranga in-2) : “Efa nandefasan'ny masoivohon'i Madagasikara any Shina fangataham-potoana ireo Oniversite ireo saingy tsy nanaiky izany intsony”, hoy izy ireo. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
betsabetsaka (nitranga in-1) : Manantena ny hahita mpividy betsabetsaka ihany anefa ireo tranombarotra rehefa vanim-potoana manakaiky faran'ny taona tahaka izao. (VAROTRA-Tratry ny krizy hatramin’ ny tsenan’ny zava-maneno)
legioma (nitranga in-1) : Ny sakafo indray dia vary, hena ary legioma no sakafon'izy ireo isan'
andro. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Jocelyn (nitranga in-2) : «Mamatsy fitaovam-pianarana, toy ny boky sy ny fitaovana fampiasa amin'ny fitsaboana ny Ccs», hoy Razafindrakoto Jocelyn, filoha nasionalin'ny Ccs. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
Barcelone (nitranga in-1) : Isan'ny nanampy azy ny traikefa azony tany amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, tamin' ny volana aogositra, tany Barcelone. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
bala (nitranga in-2) : “Ekena fa misy laharana ahafahana mamantatra ny nihavian'ny bala tokoa nefa misy hatrany ny olana. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
nataonà (nitranga in-1) : Araka ny ambaran'ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana Momba ny Fahasalamana, manodidina ny 1,5 tapitrisa eo ho eo ny fanalàn-jaza natao tao MENA tamin'ny 2003, tanatin'ny fepetra tsizarizary, nataonà olona tsy tsara fiofanana, na izy roa mitambatra. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
forehitry (nitranga in-1) : Zaza menavava fito volana no may kila forehitry ny afo tamin'izany hain-trano izany. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
avylavitra (nitranga in-2) : Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Nandika avylavitra
navoaka (nitranga in-1) : Hoy i Denecia J S Boodoo :
tratrany (nitranga in-4) : Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny andavan'androm-piainan'ireo izay tratrany anefa ny aretina Parkinson. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
Pierre (nitranga in-1) : Anio alina no hiainga hamonjy io ady goavana io ny delegasiona malagasy, tarihin'ny filohan' ny federasiona, Solofoniaina Rafiringa Pierre sy ny tale teknika nasionaly, Joseph Randrianasolo. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
sehatry (nitranga in-2) : 45 taona izao no niasan'ny Foiben'ny kristianina misahana ny fahasalamana (Ccs) eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nanontany (nitranga in-1) : Hatrany amboalohany, i @john_yearwood, mpanao gazety, dia nanontany tena raha toa nitaky seza haingana loatra ny olona :
hôpitaly (nitranga in-1) : ***Mpamily kamiao maty
Sociedad (nitranga in-1) : Ao amin'ny vondrona A, dia mbola mila miady mafy ny Manchester United (isa 7) na dia ho tsara toerana ihany aza raha mandresy ny Real Sociedad (isa 0) any an-tanin'ity farany, anio. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
mpi­tsara (nitranga in-1) : Rehefa vita ny fiofanana dia misy mpi­tsara avy amin'ny Fitsarana mampanao ny fanadinana ireo alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
nifanekana (nitranga in-1) : Tsy arakaraka ny zavatra nifampiresahana sy nifanekana tany am-boalohany ny zava-nisy. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
United (nitranga in-1) : Ao amin'ny vondrona A, dia mbola mila miady mafy ny Manchester United (isa 7) na dia ho tsara toerana ihany aza raha mandresy ny Real Sociedad (isa 0) any an-tanin'ity farany, anio. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
andanian' (nitranga in-1) : Izay andanian'ireo Parlemantera sasany 5 taona, 10 andro no nanaovako azy… “
Ampasinamaningory (nitranga in-1) : 600 ariary miampy rojo volamena no lasan'ny jiolahy miisa telo, tany Ankoba, kaominina ambanivohitra Ampasinamaningory Analanjirofo ny 2 novambra teo. (sombiny)
mazamazana (nitranga in-1) : #TTPolitics #byelection #StJoseph
mandate (nitranga in-1) : Keith Rowley, ao anatin'ity bitsika ity :
baptiste (nitranga in-2) : com/y0Z7GBcgMJ
Nojerena (nitranga in-1) : Nojerena hatramin'ireo karazana tsaramaso mena na mara mena ka ambony kalitao sy be otrik'aina any ivelany, izay nambaran'iry farany fa hafarana sy hampi-
tomboina eto an-toerana. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
nampianarina (nitranga in-1) : Efa nampianarina ilay alika avokoa izany. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
anvivon' (nitranga in-1) : Mahazo taratasy fanamarinana iavokoa ireo rehetra mahavita taom-pianarana eny anvivon'izy ireny. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
hanilihana (nitranga in-1) : Zara aza nisy ireo lesoka marobe tamin'ny fikarakarana ny fifidianana hanilihana ny rihatra. (Bao tsy mivily-SATRIKO AZA MARATRA)
Amboaratiana (nitranga in-1) : noraisin'i Domoinanavalona Amboaratiana sy Lalanomena Anthony Andrianirina ny laharana voalohany eo amin'ny filaharan'ireo mpilomano malagasy, taorian'ny fifaninanana tsapa natrehan'izy ireo, tamin'ny faran'ny herinandro teo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Mangamaso (nitranga in-1) : Nahoana anefa no miteny indray ry Mangamaso hoe «tsy azo kitihina intsony ny lisitra». (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
2009 (nitranga in-1) : Tamin'ny 2009, ilay sangany amin'ireo tampom-pahaizana ara-pivavahana amin'ny Silamo ao Ejipta dia namoaka fatwa iray (didy ara-pivavahana) hanomezana alàlana ny vehivavy hanao fanalàn-jaza raha toa ka niharan'ny fanolanana. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
hifaninanana (nitranga in-1) : “Ny fiandrasana ny fotoana hifaninanana no ela. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
biletà (nitranga in-2) : Tokony ho nampandraisina anjara tamin'ny fampianarana ny vahoaka mahakasika ny fampiasana ilay biletà tokana koa ny fiangonana sy ny sekoly», hoy ihany ilay fanambarana. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Analamanga (nitranga in-2) : Nomontsanin' ity farany tamin'ny alalan' ny isa 42 no ho 21 ny Sporting avy eto Analamanga, omaly. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
hanomezana (nitranga in-1) : Tamin'ny 2009, ilay sangany amin'ireo tampom-pahaizana ara-pivavahana amin'ny Silamo ao Ejipta dia namoaka fatwa iray (didy ara-pivavahana) hanomezana alàlana ny vehivavy hanao fanalàn-jaza raha toa ka niharan'ny fanolanana. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
News (nitranga in-1) : Araka ny pejy Facebook-n'ny C News Live, Alleyne izy tenany dia nanamarika hoe :
hahafahana (nitranga in-1) : Tanjona ny hahafahana miditra eo amin' ny filaharana apetraky ny federasiona iraisam-pirenen'ny judo. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
hihemotra (nitranga in-1) : Tsy hihemotra izahay satria ny vahoaka izay entinay no mitaky miaraka aminay », hoy Randriamanalina Jean Marc, mpitondra tenin'ireo sefo fokontany tamin' ny antso an-tariby, omaly. (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
Parlemantera (nitranga in-3) : Lalàm-pifidianana an'ny Malagasy io ary novolavolain'ny Malagasy, ka dieny mbola mivory ireo Parlemantera mpanao lalàna, asaivo laniany sy ekeny ny fampiasana ny lisitra fanampiny sao hanahirana satria tsy hisy Malagasy hanaiky ho gisitra eo. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
mpahaihozatatitra (nitranga in-1) : Nitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika izany Razafimahefa Julien, mpitsabo ny mpahaihozatatitra (neurologue) etsy Befelatanana. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
aretina (nitranga in-9) : dokotera Razafimahefa Julien, misahana ny aretina “Parkinson”
Commons (nitranga in-1) : 0 Generic Creative Commons license. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
natao (nitranga in-10) : Mbola nisy olona roa hafa koa voasambotr'ireo mpiray dina ka natao tahaka izay ihany koa. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
vitany (nitranga in-1) : Samy manana isa sivy avy, izany hoe samy nahazo fandresena tamin'ireo lalao telo efa vitany ireo ekipa telo ireo. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Juventus (nitranga in-1) : Ho an'ny vondrona B, dia azo lazaina ho herijika farany ny an'ny Juventus de Turin (isa 2) anio raha hampiantrano ny Real Madrid (isa 9) izy ireo rehefa resin'ity farany 2 no ho 1 tamin'ny lalao mandroso. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
andraikitry (nitranga in-1) : Namaly tsotra indray anefa ireo sefo fokontany fa « tsy voalaza ao anatin'ny lalàna ny andraikitry ny sefo fokontany mahakasika ny fizarana kara-pifidianana izany ». (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
fahazoana (nitranga in-1) : Raha voahaja ireo fepetra takiana, toy ny tsy fahazoana mandehandeha amina faritra vao nisiana heloka dia ahitam-bokany ny fikarohana ataon'ny alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Sergio (nitranga in-1) : Soratra : Faralala
Krisimasy (nitranga in-1) : Matetika no misy rahateo ny fihenam-bidy rehefa manatona ny fetin'ny Krisimasy sy taom-baovao. (VAROTRA-Tratry ny krizy hatramin’ ny tsenan’ny zava-maneno)
hifaninanan' (nitranga in-1) : Sokajy latsaky ny 56 kg no hifaninanan'i Johnny, izay efa nahazoany matetika ny anaram-boninahitra tompondakan'i Mada- gasikara, teo amin'ny savate boxe française. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
iokraniana (nitranga in-1) : Nibata fandresena miezinezina 4 no ho 0 io ekipa alemana (isa 6) io nanoloana ity ekipa iokraniana (isa 4) ity tamin'ny lalao mandroso. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
daba (nitranga in-1) : Ireo mpitarika fivavahana mively daba manohitra ilay safidy sy ireo politisiana basha dia zara raha manana ny toerany amin'ny fandraisana manoloana ny fanapahan-kevitr'ireo vehivavy hanapaka ny fitondrany vohoka. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Boom (nitranga in-1) : Isan'ireny ry Mathieu sy Boom, izay hiady ny anaram-boninahitra malagasy. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
nikirakirana (nitranga in-1) : Isan'izany ny mahakasika ilay “logiciel” nikirakirana ilay lisi-pifidianana. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Eugène (nitranga in-3) : Nanatrika ity fihaonana ity ny profesora Tehindrazanarivelo Alain, Noelson William, Lahiniriko Jean ary Voninahitsy Jean Eugène. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Marc (nitranga in-1) : Tsy hihemotra izahay satria ny vahoaka izay entinay no mitaky miaraka aminay », hoy Randriamanalina Jean Marc, mpitondra tenin'ireo sefo fokontany tamin' ny antso an-tariby, omaly. (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
twitter (nitranga in-4) : twitter. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
some (nitranga in-1) : some not so sure it's over. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nahavery (nitranga in-1) : Omaly indray dia mbola nailiky ny AS Saint-Michel, tamin'ny alalan'ny isa 30 no ho 27 izy ireo ka nahavery fanan- tenana azy ireo eo amin' ny ady ho an'ny anaram-boninahitra tompondaka. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
Voninahitsy (nitranga in-3) : Nanatrika ity fihaonana ity ny profesora Tehindrazanarivelo Alain, Noelson William, Lahiniriko Jean ary Voninahitsy Jean Eugène. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Italie (nitranga in-1) : Efa tratran' izany isika rehefa nanondrana tao Italie sy Espagne”, hoy izy. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
fatwa (nitranga in-1) : Tamin'ny 2009, ilay sangany amin'ireo tampom-pahaizana ara-pivavahana amin'ny Silamo ao Ejipta dia namoaka fatwa iray (didy ara-pivavahana) hanomezana alàlana ny vehivavy hanao fanalàn-jaza raha toa ka niharan'ny fanolanana. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
lalàna (nitranga in-7) : Lalàm-pifidianana an'ny Malagasy io ary novolavolain'ny Malagasy, ka dieny mbola mivory ireo Parlemantera mpanao lalàna, asaivo laniany sy ekeny ny fampiasana ny lisitra fanampiny sao hanahirana satria tsy hisy Malagasy hanaiky ho gisitra eo. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
International (nitranga in-1) : Amin'ity taona ity dia eto Madagasikara no hivoahan'ny anaran'izay tompondakan'i Afrika”, hoy i Adam Yachine, filoha lefitry ny federasiona malagasin'ny fanamoriana fiarakodia manazava ny antony handraisan'ireto teratany afrikanina ireto anjara amin'ny “Rallye International de Madagascar”. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
nodimbiasiny (nitranga in-1) : Toy ny nanao fanazarantena i Lalanomena teo anatrehan'ireo mpilomano nifanandrina taminy ary nanararaotra ny tsy fandraisana anjaran'i Sitraka Ralefy, izay laharana voalohany nodimbiasiny. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
ankilan' (nitranga in-1) : Mandrisika ny fanjifana ny tsaramaso mena ihany koa anefa izy etsy ankilan' izay. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
hanohanana (nitranga in-1) : Haharitra dimy andro ny hetsika ahafahan'ireo tsara sitrapo manolotra izay foiny hanohanana ny fanontana. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
Moscou (nitranga in-1) : Mety hanara-dia azy any amin' ny dingana manaraka ny Manchester City (isa 6) raha mibata fandresena manoloana ny CSKA Moscou (isa 3). (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Ranomasimbe (nitranga in-1) : Samy nandeha tsy nisy nahasakana kosa ny lalao natrehan'ny THBC, tompondakan'i Madagasikara sokajy vehivavy sady tompon- dakan'ny Ranomasimbe Indianina sy ny HBCT, sokajy lehilahy. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
tarihy (nitranga in-2) : Anio alina no hiainga hamonjy io ady goavana io ny delegasiona malagasy, tarihin'ny filohan' ny federasiona, Solofoniaina Rafiringa Pierre sy ny tale teknika nasionaly, Joseph Randrianasolo. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
natokana (nitranga in-2) : Maro anefa no voasarika aminy fianarana mitendry zava-maneno na dia miakatra toy ny vidim-piainana ihany koa aza ny saram-pianarana eny anivon'ireo sekoly natokana ho an'izany. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
Bayer (nitranga in-1) : Efa karazan'ny fiadiana ny toerana faharoa kosa ny fihaonan'ny Shaktar Donetsk sy ny Bayer Leverkusen. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
6308 (nitranga in-1) : Joseph : PNM vato 6308 ; ILP vato 1986 ; UNC vato 5605; IND vato 303 ; DNA vato 9. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
hanaovana (nitranga in-2) : « Ilaina ny hanaovana fanadihadiana lalina mihitsy ka ahitana izay tena antony nahatonga ireny lesoka tamin' ny fikarakarana ny fifidianana ireny. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Keith (nitranga in-3) : Keith Rowley, ao anatin'ity bitsika ity :
safidiany (nitranga in-1) : “Vary iray gony mitentina Ar 65 000 ho azo Ar 56 000 ao anatin'io efatra andro io raha mitondra ilay takelaka kely amin'ny gazety ho aparitakay amin'ny 7 novambra izao eny amin' izay toeram-pivarotana safidiany ireo mpanjifa. (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
minisiteran' (nitranga in-4) : Fahasalamana
Mitohy ny fanatan­terahan'ny minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka ireo tetikasa rehetra mahakasika ny fahasalamana, na dia teo aza ny fialan'ny minisitra Johanita Ndahimananjara. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
Murielle (nitranga in-1) : Faharoa i Murielle Rabarijaona (959 isa) raha i Hanta Valisoa Raharvel (905 isa) no teo amin'ny laharana fahatelo ho an'ny vehivavy. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
volabe (nitranga in-1) : Ny fanomezany volabe nikarakarana ny fifidianana akory tsy atakalo ny fiandrianam-pirenena sy ny zon'ny olona tokony hifidy. (Tera BARY-Tsy hanaiky ho gisitra!)
nirefodrefotra (nitranga in-1) : Nitsoaka nandao ny tranony avokoa ny mponina noho ny fandrenesana ny poa-basy nirefodrefotra sy ny tahotra. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
hahatonga (nitranga in-1) : Hatramin'izao dia tsy voafaritra mazava ny karazan'olona mety ho tratrany, na ny antony mety hahatonga azy eo amin'ny olona iray. (ARETIN’NY FANGOVITANA-Mitsabo tena mandrapahafaty ireo voan’ny «Parkinson»)
habe (nitranga in-1) : “Ny biby, ny habe, ny taham-panafody ambony loatra ao anatin'ny vokatra no isan'ny andavan'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra tsaramaso eto amintsika matetika. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
boninahitra (nitranga in-1) : “Sambany vao hipetraka ho fifaninanana hitsarana ny adin'ireo mpanamory afrikanina te hibata ny anaram- boninahitra ny RIM. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
Maintirano (nitranga in-1) : ***Olona telo maty notifirina
Jimmy (nitranga in-1) : Nivoaka sady nananga-tanana ilay mpaka an-keriny izay nitondra basy Makarov tamin'io», hoy ny fitantaran-dRazanakoto Andriamahefa Jimmy, mpibaiko ireo alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
shina (nitranga in-1) : mila vahaolana maika ireo mpianatra any shina
Marisarisa hitady vahaolana. (FIANARANA ANY IVELANY-Horoahan’i Shina mody ireo mpianatra tsy mahaloa saram-pianarana)
Johnny (nitranga in-3) : Hihaona indray amin'ny tompondakan'i Eoropa, Sarr Osman, eo amin'ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny savate boxe française i Johnny Laurent Rakotondrabe. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
fihetsiky (nitranga in-2) : « Miandry izahay izay ho fihetsiky ny manampahefana sy ny Cenit. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
fanabezana (nitranga in-1) : Fialam-boly sy fanabezana ankizy mba tsy hirona any amin'ny zava-mahadomelina no tena tanjona voalohan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ireo tanora liana amin'ny fianarana mozika. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
simulation (nitranga in-1) : (53 amin'ny birao 53 ) Loharano: Solution by simulation. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
hatreo (nitranga in-1) : Tsy azon'ny sasany antoka hoe vita hatreo ny amin'io. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
nilaza (nitranga in-1) : Filazana ofisialy iray avy amin'ny Kaomisionan'ny Fifidianana sy ny Fanarahamaso no nilaza fa ilay mpihazakazaka avy amin'ny mpanohitra no nitarika tamin'ny isam-bato 779; nihoatra kelin'ny 50% amin'ny olona afaka fidiana no nifidy. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
ekipa (nitranga in-10) : Tsy hananany herijika hiatrehana ny lalao famaranana intsony ny vokatra ratsy azon'izy ireo satria ireo ekipa roa voa- lohany eo amin'ny vondrona tokana misy ekipa enina ihany no hiditra amin'ny dingana farany hahazoana miady ny anaram-boninahitra. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
naparitaka (nitranga in-1) : Masomboly 200 taonina
Cepe (nitranga in-1) : «Mbola tsy nahazo ny anjara tambin-karama tamin'ny fanadinana Bepc sy Cepe tamin'ny taona 2012 ny mpampianatra tsy miankina sy ny karamain'ny Fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra (Fram), raha efa nahazo izany kosa ireo mpiasam-panjakana», hoy ny fanazavana noentin-dRaheliarisoa Rondro Régine, Talen'ny Sekoly fanabeazana fototra (Epp) Nanisana. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
Mathieu (nitranga in-1) : Isan'ireny ry Mathieu sy Boom, izay hiady ny anaram-boninahitra malagasy. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
itodihana (nitranga in-1) : Raha iny taona 2012 iny no itodihana dia lelavola Ar 1 900 000 no voaangona ho fanontana Baiboly vaovao. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
Nomarihy (nitranga in-1) : Nomarihin'i Velombola Second Modeste sahady anefa fa masiaka ny tsena iraisam-pirenena. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
bato (nitranga in-1) : Ho an'ireo kandidà hafa indray, toa an'i Hajo Andrianainarivelo sy Roland Ratsiraka dia nifototra kokoa tany amin'ny tsy fanekena ireo voka-pifidianana tamina birao fandatsaham- bato maromaro ny fitarainan'izy ireo. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
communication (nitranga in-2) : Fomba hafa mihitsy indray no hitondran'ny « Galactik communication » ny tsenabe varoboba karakarain'izy ireo ny 8 hatramin'ny 12 novambra ho avy izao. (HETSIKA ARA-BAROTRA-Hisy fampihenam-bidy ny vary, fanaovam-bolo, fitaizan-jaza..)
hananany (nitranga in-1) : Tsy hananany herijika hiatrehana ny lalao famaranana intsony ny vokatra ratsy azon'izy ireo satria ireo ekipa roa voa- lohany eo amin'ny vondrona tokana misy ekipa enina ihany no hiditra amin'ny dingana farany hahazoana miady ny anaram-boninahitra. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
tanaty (nitranga in-2) : tanaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe Firaisana ara-nofo, Fanalàn-jaza ary Fifehezantena, miverina mitodika ny lasa nangirifiry niainany ilay bilaogera tsy mitonona anarana ao amin'ny Hala/Cleo no sady manohana ihany koa ilay namany nandrita ireo dingana narahana tamin'ny fanalàn-jaza tao Ejipta. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Ambodimandresy (nitranga in-1) : ***Mpamily kamiao maty
Talen' (nitranga in-1) : «Mbola tsy nahazo ny anjara tambin-karama tamin'ny fanadinana Bepc sy Cepe tamin'ny taona 2012 ny mpampianatra tsy miankina sy ny karamain'ny Fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra (Fram), raha efa nahazo izany kosa ireo mpiasam-panjakana», hoy ny fanazavana noentin-dRaheliarisoa Rondro Régine, Talen'ny Sekoly fanabeazana fototra (Epp) Nanisana. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
notifirina (nitranga in-2) : ***Olona telo maty notifirina
ampilalaovina (nitranga in-1) : Entina mivoaka kely dia ampilalaovina. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
1986 (nitranga in-1) : Joseph : PNM vato 6308 ; ILP vato 1986 ; UNC vato 5605; IND vato 303 ; DNA vato 9. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
mitsongodia (nitranga in-1) : Mifototra amin'ny fanamboloana ny fomba fiasan'ireo alika mitsongodia. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
allemand (nitranga in-1) : »Berger allemand » avokoa izao ireo karazan'alika ato aminay. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
nanavotr' (nitranga in-1) : Voalaza fa nitsambikina tamin'ilay fiara, niezana nanavotr'aina ilay mpamily. (sombiny)
voararan' (nitranga in-1) : Na eo aza ny zava-misy, dia voararan'ny lalàna ny fanalàn-jaza – na inona na inona afa-tsy ireo atao raha toa ka hitera-doza ho an'ny fahasalaman'ilay ramatoa. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Alain (nitranga in-1) : Nanatrika ity fihaonana ity ny profesora Tehindrazanarivelo Alain, Noelson William, Lahiniriko Jean ary Voninahitsy Jean Eugène. (Tapatapany)
Anthony (nitranga in-1) : noraisin'i Domoinanavalona Amboaratiana sy Lalanomena Anthony Andrianirina ny laharana voalohany eo amin'ny filaharan'ireo mpilomano malagasy, taorian'ny fifaninanana tsapa natrehan'izy ireo, tamin'ny faran'ny herinandro teo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
ifotorany (nitranga in-1) : Andraikitra lehibe ifotorany ny fanampiana ny mpianatra ho mpitsabo sy ireo mpitsabo efa am-perinasa. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
HBCT (nitranga in-2) : Tamin'ny lalao voa- lohany dia niondrika teo anatrehan'ny HBCT, avy any Toliara ihany tamin'ny alalan'ny isa 27 no ho 20 ny ekipan'ny Fo Masina avy any Toliara. (HANDBALL-Tsy hiatrika famaranana ny Asco lehilahy)
latsa­ky (nitranga in-1) : Tsy latsa­ky ny 15% izany any amin' ny Epp sasany. (TAPATAPANY)
Elena (nitranga in-1) : Ilay kalazavavy teo amin' ny judo malagasy, Vola Elena Raelison, no hitarika ny delegasiona malagasy hiainga amin'ny alakamisy ho avy izao hatramin'ny 12 novambra. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
Champions (nitranga in-1) : iray amin'ireo klioba heverina hiakatra ampahavalon-dalana ny Real Madrid
Rasoamaromaka (nitranga in-1) : hiaraka amin'ny Subaru i Hery Be amin'io fifaninanana io
hivoahan' (nitranga in-2) : Amin'ity taona ity dia eto Madagasikara no hivoahan'ny anaran'izay tompondakan'i Afrika”, hoy i Adam Yachine, filoha lefitry ny federasiona malagasin'ny fanamoriana fiarakodia manazava ny antony handraisan'ireto teratany afrikanina ireto anjara amin'ny “Rallye International de Madagascar”. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
GSIS (nitranga in-1) : Niditra an-tsehatra ihany koa ny vondron'ny zandary ao amin'ny GSIS satria nitam-basy ny mpaka an-keriny. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
drano (nitranga in-1) : « Toherinay marin- drano io voka-pifidianana io. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
niavian' (nitranga in-1) : Rehefa halefa any amin'ny foibe ara-teknika ny fangatahana hamantarana ny niavian'ilay bala dia fantatra fotsiny hoe avy amin'ny Tafika na Polisy na Zandary ilay izy fa tsy voafaritra mazava ny toby nivoahany” hoy ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
Rakotonarivo (nitranga in-1) : Mitentina 5 000 ariary eo isan'andro isaky ny alika ny vola lany amin'ny fitaizana», hoy kosa ny lietnà Rakotonarivo Jeannot, manam-pahaizana manokana momba ny alika. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Governance (nitranga in-2) : #TTPolitics #byelection #StJoseph
Jean (nitranga in-8) : Nanatrika ity fihaonana ity ny profesora Tehindrazanarivelo Alain, Noelson William, Lahiniriko Jean ary Voninahitsy Jean Eugène. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
arety (nitranga in-1) : dokotera Razafimahefa Julien, misahana ny aretina “Parkinson”
mpisera (nitranga in-1) : Samy nivoahan'ny fanehoankevitra mikasika ilay vokatra daholo, avy amin'ireo mpisera anaty aterineto, na ny Twitter na ny Facebook. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
fanazarantena (nitranga in-1) : Toy ny nanao fanazarantena i Lalanomena teo anatrehan'ireo mpilomano nifanandrina taminy ary nanararaotra ny tsy fandraisana anjaran'i Sitraka Ralefy, izay laharana voalohany nodimbiasiny. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Twitter (nitranga in-1) : Samy nivoahan'ny fanehoankevitra mikasika ilay vokatra daholo, avy amin'ireo mpisera anaty aterineto, na ny Twitter na ny Facebook. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
mpamapianatra (nitranga in-1) : « 20 no mpampianatra piano eto aminay raha 2 kosa ireo mpamapianatra gitara », araka ny nambarany'ny sekreteran'ny ivon-toerana ara-kolontsaina malagasy sy alemana (CGM) izay fianarana mampianatra mozika etsy Antaninarenina. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
Tiorkia (nitranga in-1) : Ny miavaka amin'izany dia i Tonizia sy Tiorkia, izay manana lalàna somary malalaka kokoa momba ny fanalàn-jaza. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
tomboina (nitranga in-1) : Nojerena hatramin'ireo karazana tsaramaso mena na mara mena ka ambony kalitao sy be otrik'aina any ivelany, izay nambaran'iry farany fa hafarana sy hampi-
Zimbaboena (nitranga in-1) : Mahatratra 41 ireo fiarakodia hiainga avy etsy amin' ny Lapan'ny tanàna Analakely, amin'ny zoma ho avy izao, ka teratany Zambianina, Jassy Singh sy ilay Zimbaboena, Jas Mangat, no vahiny amin'izany hetsika izany. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
Raharvel (nitranga in-1) : Faharoa i Murielle Rabarijaona (959 isa) raha i Hanta Valisoa Raharvel (905 isa) no teo amin'ny laharana fahatelo ho an'ny vehivavy. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Subaru (nitranga in-1) : hiaraka amin'ny Subaru i Hery Be amin'io fifaninanana io
namaky (nitranga in-1) : Nisy namaky ny Cecam tany an-toerana. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
nidiran' (nitranga in-1) : Ho an'ny olona izay maniry ny haka ireo alika dia voalohany indrindra tsy azo ifaneraserana ilay toerana nidiran'ireo mpangalatra na jiolahy. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Awadalla (nitranga in-1) : Mpanoratra Ahmed Awadalla · Nandika avylavitra
hamonjena (nitranga in-1) : Faran'izay zavatra tena raràn'ny lalàna ao Ejipta ny fanalàn-jaza afa-tsy hoe raha hamonjena ny ain'ilay reny, izay tranga matetika hita any amin'ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA). (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
noraofy (nitranga in-1) : Amin'ireny fanafihana rehetra ireny dia misy ny vodim-bala noraofin'ny zandary tamin'ny fotoana nandalovany teny, saingy tsy mety hita mazava izay tena fihaviany. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
niharan' (nitranga in-1) : Tamin'ny 2009, ilay sangany amin'ireo tampom-pahaizana ara-pivavahana amin'ny Silamo ao Ejipta dia namoaka fatwa iray (didy ara-pivavahana) hanomezana alàlana ny vehivavy hanao fanalàn-jaza raha toa ka niharan'ny fanolanana. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Nanisana (nitranga in-1) : «Mbola tsy nahazo ny anjara tambin-karama tamin'ny fanadinana Bepc sy Cepe tamin'ny taona 2012 ny mpampianatra tsy miankina sy ny karamain'ny Fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra (Fram), raha efa nahazo izany kosa ireo mpiasam-panjakana», hoy ny fanazavana noentin-dRaheliarisoa Rondro Régine, Talen'ny Sekoly fanabeazana fototra (Epp) Nanisana. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
noraisy (nitranga in-1) : noraisin'i Domoinanavalona Amboaratiana sy Lalanomena Anthony Andrianirina ny laharana voalohany eo amin'ny filaharan'ireo mpilomano malagasy, taorian'ny fifaninanana tsapa natrehan'izy ireo, tamin'ny faran'ny herinandro teo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Estellah (nitranga in-1) : Tsy nandray anjara rahateo i Estellah Fils Rabetsara, mpifanandrina akaiky taminy. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Antaninarenina (nitranga in-2) : Tsy hanohana kandidà
Nilaza ireo kandidà nirotsaka ho Filoham-pirenena voasokajy ho “madinika” omaly teny amin'ny Hôtel Colbert Antaninarenina fa tsy hanohana kandidà izy ireo amin'ny fihodinana faharoa. (TARANJA MOZIKA-Mahatratra hatrany amin’ ny Ar 395 000 ny saram-pianarana)
noentiny (nitranga in-2) : Tafavoaka ny lalana ary latsaka tany anaty hady ilay fiarabe noentiny. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
Mazàna (nitranga in-1) : ireo fitaovana mampidoboka feo no tena be mpividy amin'izao
Ampandrianomby (nitranga in-1) : Entina avy hatrany eny amin'ny mpitsabo biby eny Ampandrianomby izay marary ka tsaboina toy ny olona mihitsy. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Itasy (nitranga in-1) : Raha ny fanadihadiana natao tao anatin' ny Faritra Itasy dia mihinana tsaramaso ny 100%-n'ny mponina. (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
Singh (nitranga in-1) : Mahatratra 41 ireo fiarakodia hiainga avy etsy amin' ny Lapan'ny tanàna Analakely, amin'ny zoma ho avy izao, ka teratany Zambianina, Jassy Singh sy ilay Zimbaboena, Jas Mangat, no vahiny amin'izany hetsika izany. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
hanapaka (nitranga in-1) : Ireo mpitarika fivavahana mively daba manohitra ilay safidy sy ireo politisiana basha dia zara raha manana ny toerany amin'ny fandraisana manoloana ny fanapahan-kevitr'ireo vehivavy hanapaka ny fitondrany vohoka. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
mpahafantatra (nitranga in-1) : dokotera Razafimahefa Julien, misahana ny aretina “Parkinson”
Real (nitranga in-4) : iray amin'ireo klioba heverina hiakatra ampahavalon-dalana ny Real Madrid
Copenhague (nitranga in-1) : Raha tsy mahazo vokatra tsara izy ireo, kanefa mandresy ny FC Copenhague (isa 1) ny klioba tiorka Galatasaray anio, dia ity farany no efa isan' ny tsara toerana hiatrika ny ampahavalon-dalana. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
bilaogera (nitranga in-3) : tanaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe Firaisana ara-nofo, Fanalàn-jaza ary Fifehezantena, miverina mitodika ny lasa nangirifiry niainany ilay bilaogera tsy mitonona anarana ao amin'ny Hala/Cleo no sady manohana ihany koa ilay namany nandrita ireo dingana narahana tamin'ny fanalàn-jaza tao Ejipta. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
nojerena (nitranga in-1) : «Misy ny misoratra ho isan'ireo mpiandraikitra ny fanadinana, rehefa nojerena anefa, dia tsy hita teo an-toerana akory izy ireo. (TAMBIN-KARAMAN’NY TAONA 2012-Tsy nahazo ny anjarany ny mpampianatra tsy miankina)
ampanaovina (nitranga in-3) : Manaraka izay baiko rehetra ampanaovina azy ireo alika tsara ofana
fampiasa (nitranga in-2) : «Mamatsy fitaovam-pianarana, toy ny boky sy ny fitaovana fampiasa amin'ny fitsaboana ny Ccs», hoy Razafindrakoto Jocelyn, filoha nasionalin'ny Ccs. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
hampa­naovina (nitranga in-1) : Ho an'izay afaka kosa dia mahazo taratasy fahazoan-dalana afaka manao ilay asa hampa­naovina azy, soniavin'ilay mpitsara. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Andrianainarivelo (nitranga in-1) : Ho an'ireo kandidà hafa indray, toa an'i Hajo Andrianainarivelo sy Roland Ratsiraka dia nifototra kokoa tany amin'ny tsy fanekena ireo voka-pifidianana tamina birao fandatsaham- bato maromaro ny fitarainan'izy ireo. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Béatrice (nitranga in-1) : Ny filohan'ny Cenit, Atallah Béatrice anefa dia milaza fa « isan'ireo tompon'andraikitra tamin'ny tsy fizarana ny kara-pifidianana ireo sefo fokontany ». (Fandravana ny Cenit-Tsy nisy nihaino ireo sefo fokontany maromaro)
efitrano (nitranga in-1) : Ho fanatevenana io asa fanontana Baiboly io ihany sy hanalefahana ny vidin'izany amin'ny mpanjifa dia nanatontosa hetsika « Biblethon » tao amin'ny efitrano malalaky ny kaominin'i Mahajanga ny fikambanana Mampiely Baiboly, ny alarobia 30 oktobra lasa teo. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
Nandika (nitranga in-2) : Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Nandika avylavitra
Lahiniriko (nitranga in-1) : Nanatrika ity fihaonana ity ny profesora Tehindrazanarivelo Alain, Noelson William, Lahiniriko Jean ary Voninahitsy Jean Eugène. (Tapatapany)
mpitsongodia (nitranga in-7) : Raha takian'ny mpitsabo ny hialany sasatra dia tsy miasa izy mandritra izay fotoana izay», hoy ny fanazavan'ny lehiben'ny mpikarakara ireo alika mpitsongodia eny Ivato. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Anosy (nitranga in-1) : ireo sefo fokontany nanao fanambaràna teny Anosy
voavaly (nitranga in-1) : Hatrizay anefa dia mazàna ny antsasak'io filàna io ihany no voavaly eto amintsika. (FITAOVAM-PINOANA-Baiboly 150 000 no ilaina isan-taona)
hampiantrano (nitranga in-1) : Ho an'ny vondrona B, dia azo lazaina ho herijika farany ny an'ny Juventus de Turin (isa 2) anio raha hampiantrano ny Real Madrid (isa 9) izy ireo rehefa resin'ity farany 2 no ho 1 tamin'ny lalao mandroso. (KITRA EOROPEANINA-“CHAMPIONS LEAGUE”-)
Hajo (nitranga in-1) : Ho an'ireo kandidà hafa indray, toa an'i Hajo Andrianainarivelo sy Roland Ratsiraka dia nifototra kokoa tany amin'ny tsy fanekena ireo voka-pifidianana tamina birao fandatsaham- bato maromaro ny fitarainan'izy ireo. (FITORIANA ENY AMIN’NY CES-Mitaky fanafoanana fifidianana ry Pierrot Rajaonarivelo sy Monja Roindefo)
Tehindrazanarivelo (nitranga in-1) : Nanatrika ity fihaonana ity ny profesora Tehindrazanarivelo Alain, Noelson William, Lahiniriko Jean ary Voninahitsy Jean Eugène. (Tapatapany)
Ambohijanaka (nitranga in-1) : Isan'ny faritra nisehoan'ny fanafihan-jiolahy nisesisesy vao andro vitsy lasa izay ny teny Ambohijanaka sy ny manodidina azy. (FAMPANDRIANA FAHALEMANA-Hampihatra paik’ady vaovao indray ny mpitandro ny filaminana)
tanànan' (nitranga in-1) : Jiolahy efatra mirongo basy no nanafika tao amin'ny tanànan'Ankarabato, fokontanin'Ambalavelona Mampikony ny sabotsy 2 novambra teo tamin'ny fito ora sy sasany hariva. (FANAFIHANA NIHARO HATEZERANA-Zaza 7 volana may kilan’ny afo narehitry ny jiolahy)
voninahitry (nitranga in-1) : Hiaro ny voninahitry ny Malagasy atsy amin'ity Nosy rahavavy ity i Ny Akanto Rakotobe (-48 kg), Volasoa Ratsimiziva (-63 kg) ary Isilo Aïcha (-70 kg) eo amin' ny sokajy vehivavy. (JUDO-Handefa solontena tanora dimy any Maorisy i Madagasikara)
iraisan' (nitranga in-1) : Toerana izay teo aloha dia notànan'ilay Minisitry ny Fitsarana fahiny, Herbert Volney, avy amin'ny governemanta iraisan'ny People's Partnership. (Trinidad & Tobago: Mivoaka Mandresy ny Mpanohitra; Mbola Manantenana Hatrany Ny Governemanta)
2003 (nitranga in-1) : Araka ny ambaran'ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana Momba ny Fahasalamana, manodidina ny 1,5 tapitrisa eo ho eo ny fanalàn-jaza natao tao MENA tamin'ny 2003, tanatin'ny fepetra tsizarizary, nataonà olona tsy tsara fiofanana, na izy roa mitambatra. (Mikasika Ny Fanalàn-jaza Sy Ny Fifehezantena Amin'ny Firaisana Ara-nofo Ao Ejipta)
Second (nitranga in-2) : Ambony ny tahana vy sy ‘'zinc ao anatiny”, hoy i Velombolo Second Modeste, mpikaroka eo anivon'ny foibem-pirenena misahana ny fikarohana ampiharina amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra (Fofifa). (VOKA-PAMBOLENA-Tsy be mpihinana kanefa be otrik’aina sy azo aondrana ny tsaramaso mena)
teto (nitranga in-1) : Enim-bolana izy ireo no tonga teto. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
François (nitranga in-3) : Ny lietnà Evelontaha Jean François, no lehiben'ity sampana mpanofana alika mpitsongo dia ity ny volana avrily teo. (ADY AMIN’NY ASAN-JIOLAHY-Mpitsara no manadina ireo alika mpitson­go­dia eny Ivato)
Domoinanavalona (nitranga in-2) : noraisin'i Domoinanavalona Amboaratiana sy Lalanomena Anthony Andrianirina ny laharana voalohany eo amin'ny filaharan'ireo mpilomano malagasy, taorian'ny fifaninanana tsapa natrehan'izy ireo, tamin'ny faran'ny herinandro teo. (LOMANO – FANASOKAJIANA-Mitarika eo amin’ny filaharana i Domoinavalona sy Lalanomena)
Mangat (nitranga in-1) : Mahatratra 41 ireo fiarakodia hiainga avy etsy amin' ny Lapan'ny tanàna Analakely, amin'ny zoma ho avy izao, ka teratany Zambianina, Jassy Singh sy ilay Zimbaboena, Jas Mangat, no vahiny amin'izany hetsika izany. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
handraisan' (nitranga in-1) : Amin'ity taona ity dia eto Madagasikara no hivoahan'ny anaran'izay tompondakan'i Afrika”, hoy i Adam Yachine, filoha lefitry ny federasiona malagasin'ny fanamoriana fiarakodia manazava ny antony handraisan'ireto teratany afrikanina ireto anjara amin'ny “Rallye International de Madagascar”. (FANAMORIANA FIARAKODIA – «RIM»-Hiverina hifaninana ry Hery Be sy Kopela)
Analamahitsy (nitranga in-1) : Hisokatra amin'ny fotoam-pivavahana izay atao eny amin'ny Ekar Analamahitsy ny fampahafantarana ny 9 Novambra izao. (FIAINAM- PIKAMBANANA-Misahana mangingina ny fahasalamana ny CCS)
hamonjy (nitranga in-1) : Anio alina no hiainga hamonjy io ady goavana io ny delegasiona malagasy, tarihin'ny filohan' ny federasiona, Solofoniaina Rafiringa Pierre sy ny tale teknika nasionaly, Joseph Randrianasolo. (SAVATE BOXE FRANCAISE – «MONDIAL»-Hiatrika ny tompondakan’i Eoropa indray i Johnny Rakotondrabe)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/5_Novambra_2013&oldid=13039323"
Voaova farany tamin'ny 5 Novambra 2013 amin'ny 21:19 ity pejy ity.